သမီးအရမ်းလိုချင်နေပြီ – Grab Love Story
ပုန်းညက်ဖြူ သည် ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ကြောင့် အပျိုပေါက် ဘဝမှာ ဖိုမဆက်ဆံရေး လိင်ကိစ္စရပ်တွေကို စတင်သဘောပေါက် မြင်တွေ့ သိရှိခဲ့ရသည်လို့ ဆိုရမည် ။ မောင်းမကန်ကမ်းခြေက ဘန်ဂလိုကြီးပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အသံဗလံတွေကြောင့် ပုန်းညက်ဖြူ သွားကြည့်တဲ့အခါ ပထွေး ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုသည် အိမ်ဖေါ်လေး စန်းစန်းတင့်ကို အတင်း ကျင့်ကြံ လိင်ဆက်ဆံနေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ ကာမစပ်ယှက်မွုကို ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဖူး သိရှိသွားရတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူသည် ဒီမြင်ကွင်းတွေကို အမြဲ နေ့စဉ်လို မြင်ယောင်မိပြီး ကာမစိတ်တွေလည်း နိုးထ မိရသည် ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီလို လိင်ဆက်ဆံတာတွေကို ထပ် တွေ့ချင်မိတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် အမေ ဒေါ်မိုးပပမောင်နဲ့ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုတို့အိပ်ခန်းထဲမှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကို သိချင်မြင်ချင်မိခဲ့ရသည် ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မြင်ရနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို နည်းလမ်း ရှိဖွေမိသည် ။သူတို့ ကာမပွဲတွေကို ချောင်းကြည့်ချင်မိသည် ။ ချောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည် ။ စိတ်တွေ ထကြွတတ်လာတာမို့ ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေတဲ့ အကျင့်လည်း ရလာသည် ။
အင်တာနက်က အပြာဆိုက်တွေကို ဝင်တတ်လာသည် ။ ချပ်ခန်းတွေမှာ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ လိင်ကိစ္စ ဆွေးနွေးရင်း စိတ်ကြွလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပွတ်ပြီး အာသာဖြေတတ်လာသည် ။ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုသည် ပုန်းညက်ဖြူကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတာ ။ တနေ့မှာ မယားပါ သမီးလေးကို သူ စားရမည် လို့ ကြိမ်းသေ တွက်ထားသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးသည် တနေ့တခြား ဖွံ့ဖြိုး လှပလာသည် ။ စိုပြေလာသည် ။ တောင့်တင်းလာသည် ။ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုသည် ပုန်းညက်ဖြူကို တိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်း အကဲခတ်နေသူကြီးမို့ ပုန်းညက်ဖြူက သူနဲ့ မိုးပပမောင်တို့ ကာမစပ်ယှက်တာတွေကို လာလာချောင်းသည် ဆိုတာနဲ့ ညဖက် ကွန်ပြူတာ စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး အင်တာနက် က အပြာကားတွေကို ခိုးကြည့်ရင်းပွတ်သပ် အာသာဖြေတယ် ဆိုတာကို သိနေသည် ။ ကိုယ့်ခြံထဲက ကြက် ဘယ်တော့ ရိုက်စားစား ရသည် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပုန်းညက်ဖြူကို သူ အေးအေးဆေးဆေးစားဖို့ ကြံနေတာ ။ ဒီကြားထဲ အိမ်ဖေါ် နော်ဆွိနဲ့ သူ့အမေ နော်လီစာကိုလည်း သူ စိတ်ကြိုက်စားလိုက်ရတော့ပုန်းညက်ဖြူဖက်ကို ချက်ချင်း မလှည့်သေး ။ ဒါပေမယ့် ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ ဒီလူကြီးသည် ကြုံတာနဲ့ သူ့စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည် ဖေါ်တော့တာဘဲ ။ မနက်စောစော ဒေါ်မိုးပပမောင်က လုပ်ငန်းကိစ္စ ချိန်းထားတာကြောင့် အိမ်ကနေ စောစော ထွက်သွားရတဲ့အခါ အိမ်ဖေါ် နော်ဆွိကို ပုန်းညက်ဖြူ အိပ်ရာက နိုးလာရင် ကော်ဖီနဲ့ မုန့် ပြင်ဆင် ကျွေးလိုက်ဖို့ မှာခဲ့သည် ။ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုသည် ပုန်းညက်ဖြူ သောက်မယ့် ကော်ဖီထဲကို အိပ်ဆေး ခပ်လိုက်ပြီး ပုန်းညက်ဖြူ အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်သွားပြီး ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်သည် ။
သူ တွေ့ချင် ကိုင်ချင် လုပ်ချင်နေတဲ့ မယားပါသမီး ချောချောလှလှလေးရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်ကို တဝကြီး ရွုစားရင်း ကိုင်တွယ်တော့တာဘဲ ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး လုံးဝန်းတဲ့ နို့ကြီးတွေကို သူ ကိုင်ဆုပ် ပွတ်သပ် ကစားလို့မဝနိုင် ။ နို့သီးလေးတွေက အပြင်ကို စူမထွက်သေး ။ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်သည် နွုတ်ခမ်းသားတွေ စေ့နေသည် ။ အမွေးရေးရေးပါးပါး ပေါက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူ အနံ့ရွုသည် ။ လျာကြီးနဲ့ ယက်သည် ။ သူ့လီးက အရမ်းမတ်ထောင်ပြီး တဆတ်ဆတ်တောင် တုန်ခါနေသည် ။ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးထိုးမြှုပ်ဖို့ ပြင်နေခိုက် သူ့အိမ် တံခါးမှာ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်း အသံက ဆက်တိုက် မြည်လာသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အိပ်ခန်း တံခါးကို နော်ဆွိက လာခေါက်ပြီး…“ ဆရာ…ဆရာ..ဧည့်သည် လာနေတယ် …ဆရာ့ကိုအရေးတကြီး တွေ့ချင်လို့တဲ့….” လို့ ခေါ်လိုက်တာကြောင့် သူ ဒေါသတကြီးနဲ့ “ ဘယ်သူလာတာလဲ ” လို့ အော်မေးလိုက်သည် ။ လာတဲ့လူက သူ့အတွက် တော်တော့်ကို အရေးကြီးတာမို့ သူ ပုန်းညက်ဖြူကို သူ မစပ်ယှက်ဖြစ်လိုက် ။ဒါပေမယ့် တအိမ်ထဲ နေနေတာမို့ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုး ထပ်ရမှာပါဘဲ ဆိုပြီး ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားသည် ။ ဘိုတောက်ကျော် ဦးအောင်ဇေဝင်းကို က ပုန်းညက်ဖြူ အခန်းထဲကို ဝင်ပြီး မဟားတရား လုပ်တဲ့အချိန် ဘိုတောက်ကျော်က အုတ်ခဲနဲ့ ထုလိုက်လို့ ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ဆက် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုသည် အုတ်ခဲနဲ့ ထုတဲ့လူကဘေးတိုက်က ဘိုတောက်ကျော် ဆိုတာ ရိပ်မိတဲ့ပုံ ရှိသည် ။ နောက် သုံးရက်လောက် အကြာ ဘိုတောက်ကျော်တို့ရဲ့ တိုယိုတာ ကိုရိုလာကားသစ်လေးရဲ့ ဘော်ဒီဘေး ဖက်တွေမှာ သံချွန်နဲ့ ခြစ်ထားတဲ့ အစင်းကြောင်းတွေ ကို ဘိုတောက်ကျော်တို့ တွေ့လိုက်ရသည် ။ လူကို မုန်းကြတဲ့အခါ ကားကို ဒီလို ခြစ်တတ်တာတွေ ဘိုတောက်ကျော်တို့ အရင်ကထဲက သိထားခဲ့ကြသည် ..။ ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေလည်း လတ်တလော ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်ဖြစ်တာ မပြေလည်တာ မရှိလို့ ကားကို ဘယ်သူများ လာခြစ်သွားသလဲ စဉ်းစားလို့ မရကြဘူး ။ဘိုတောက်ကျော်ကတော့ သူ အုတ်နီခဲနဲ့ ထုတာကို တဖက်အိမ်က ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ရိပ်မိပြီး လက်စားခြေတဲ့အနေနဲ့ ကားကို အခုလို သံချွန်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ခြစ်သွားတာဘဲ နေမယ် လို့ ခန့်မှန်းကြည့်နေသည် ။ ဘိုတောက်ကျော်လည်း အဆင်ပြေရင် ပြေသလို သူတို့တိုက်ဖက်ကို ချောင်းတတ်သည် ။ တခါတလေ စိတ်တွေအရမ်း ပြင်းပြလာရင် သူတို့ ခြံဖက်ကို ခိုးဝင်တတ်သည် ။ သူတို့ တိုက်ကြီးရဲ့ ဘေးက သစ်ပင်ကြီးတွေပေါ်ကိုဖက်တက်ပြီး အပေါ်ထပ်က အခန်းတွေကို ချောင်းတတ်သည် ။ တခါမှာ နော်လီစာ ဆိုတဲ့ သူတို့အိမ်က ခိုင်းတဲ့ မိန်းမကို ဦးအောင်ဇေဝင်းကို လိင်ဆက်ဆံနေတာကို သူတွေ့လိုက်ရသည် ။ ကြည့်ရတာ ဒီမိန်းမကို အရင်ထဲက ဆက်ဆံနေကျဖြစ်မည် ။ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို မိန်းမက ဒူးလေး ထောက်ပြီး စုတ်ပေးနေတာကို တွေ့ရသည် ။ ဘိုတောက်ကျော်လည်း သူတို့ကားကိုခြစ်တဲ့ ဒီလူကြီးကို တနည်းတလမ်းနဲ့ လက်စားခြေ ချင်သည် ။
ဒါကြောင့် နော်လီစာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတာတွေကို ဓါတ်ပုံ..ဗီဒီယို ခိုးရိုက်ထားဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပြီး ကင်မရာ ငှားလို့ ရတဲ့ နေ့တနေ့မှာ ညနေဖက် တဖက်ခြံထဲကို ဝင်ဖို့ ကြံစည်လိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ မိုးက သည်းသည်းမဲမဲ ရွာသည် ။ မိုးရွာတဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့က သိပ် မကောင်းဘူး ။ ဒါကြောင့် နောက်နေ့ကျမှ ရိုက်တော့မည် လို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ စီးကရက် ခိုးသောက်ရင်း တဖက်ခြံဖက်ကို သူ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မိုးရွာထဲမှာ တိုက်ကြီးပေါ်ကို ဖက်တက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတယောက်ကို သူ တွေ့လိုက်သည် ။ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်း နဲ့ ခပ်ပိန်ပိန် လူတယောက် ။ဟာ….သူခိုးဘဲ ဖြစ်မယ်….ငါ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ…..ခဏ စောင့်ကြည့်လိုက်ဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး အရင်ဆုံး သူ့အခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေ ဗီဒီယို ကင်မရာလေးနဲ့ သူတို့တိုက်ဖက်ကို ချိန်ပြီး ရိုက်ထားလိုက်သည် ။ နောက်တော့ တုတ်တချောင်းကို အဆင်သင့် ဆောင်ထားပြီး သူတို့ ခြံဖက်ကနေ စောင့်ချောင်းနေလိုက်သည် ။ ရဲကို အကြောင်းကြားရင် ကောင်းမလား..ဒါမှမဟုတ် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကို သွားပြောရမလား..သူ စဉ်းစားနေသည် ။ ဟိုလူကတော့ ပွင့်နေတဲ့ ပြူတင်းပေါက်ကနေ တိုက်ထဲကို ဝင်သွားပြီ ။ သူက စောင့်ကြည့်ချောင်းမြောင်းနေခဲ့တဲ့လူမို့ တိုက်ကြီးထဲမှာ ဒေါ်မိုးပပမောင်နဲ့ နော်ဆွိ ဆိုတဲ့ အိမ်ဖေါ်မလေးလည်း မရှိ..ပုန်းညက်ဖြူလည်း မရှိဘဲ ဦးအောင်ဇေဝင်းကို တယောက်ဘဲ ရှိနေခဲ့တာကို သူသိနေသည် ။ ဘိုတောက်ကျော်လည်း တုတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး တဖက်ခြံနဲ့ သူတို့ဖက်ကို ခြားထားတဲ့ သံဆူးကြိုး စည်းရိုး နားမှာ ရောက်နေပြီး ခိုးဝင်သွားတဲ့လူရဲ့ အရိပ်အကဲကို စောင့်ကြည့်နေသည် ။ သူခိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြန်ထွက်လာမှာဘဲ ။ အပိုင် စောင့်နှိပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား ။ ပုန်းညက်ဖြူလေးကို ကြွေပေမယ့် သူ့ပထွေးကြီးကိုတော့ သူ မကြည် ။ သူတို့ကားကို ရစရာ မရှိအောင် ခြစ်ထားတာကို သူမမေ့ဘူး ။ သူခိုးကို ဖမ်းပေးသင့် မသင့် သူ ဆုံးဖြတ်လို့ မရသေးဘူး ။ တိုက်ကြီးရဲ့ အနောက်ဖက် တံခါးပေါက်လေးကနေ စောစောကလူ ပြန်ထွက်လာသည် ။ ကမူးရွူးတိုး ပြေးထွက်လာတာ ။
သူ့စွပ်ကြယ်အဖြူမှာ နီရဲရဲ အကွက်တွေ အများကြီး စွန်းပေနေသည် ။ သွေးတွေ ဖြစ်မည် လို့ သူ တွက်ဆလိုက်သည် ။ “ ဟာ…တခုခု ဖြစ်ပြီ ထင်တယ် . . ” သူ ငေးကြောင်ကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ဒီ ပိန်ညောင်ညောင် ငတိက ခြံရှေ့ပေါက်ကနေ ပြေးထွက်သွားသည် ။သူ ပြေးလိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ ။ နောက်ကျသွားပြီ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလူရဲ့ ပုံကို ဗီဒီယိုထဲ ရလိုက်ပြီ ။ ဘိုတောက်ကျော်လည်း သူရိုက်ထားလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဖွင့်ကြည့်သည် ။ ပုန်းညက်ဖြူတို့ တိုက်ထဲကို ခိုးဝင်သွားပြီး ခဏ အကြာ ပြန်ပြေးထွက်လာတဲ့ လူရဲ့ စွပ်ကြယ်က ပေစွန်းနေတာတွေဟာ သွေးတွေဘဲလို့ သူ ထင်သည် ။ ခဏကြာတော့ ပုန်းညက်ဖြူ ကျောင်းက ပြန်လာတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။မရှေးမနှောင်းဘဲ ဒေါ်မိုးပပမောင်တို့ကားလေး ပြန်ရောက်လာသည် ။ဘိုတောက်ကျော်လည်း တဖက်တိုက်က အိမ်ဖေါ် နော်ဆွိနဲ့ အရမ်း ခင်မင်ကြတဲ့ သူတို့အိမ်က ထမင်းချက်တဲ့ဒေါ်စိန်ကို နော်ဆွိဆီကို သွားပြီး သူတို့ဖက်မှာ ဘာဖြစ်သလဲ စပ်စုကြည့်ပေးဖို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ သူ့အဖေက အလုပ်ကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး ညနေစာ သွားစားကြမှာမို့ ရေချိုး အဝတ်လဲပြီး အဆင်သင့်စောင့်နေဖို့ ပြောလို့ သူ ရေပြေးချိုးသည် ။ အဝတ်အစားလဲပြီ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာတဲ့အချိန်ဒေါ်စိန်က “ ကိုဘို…ဟိုဖက်ခြံမှာ ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး..ရဲကားတွေ ရောက်နေတယ်….” လို့ လာပြောသည် ။ ဟာ…တခုခုတော့ ဖြစ်သွားတာ သေချာသည် ။ဘာဖြစ်သလဲ….သူ အရမ်း သိချင်နေသည်.။ “ ဒေါ်စိန်…..ဟိုဖက် ခြံမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ..သွား စုံစမ်းလိုက်ပါအုံး……” လို့ သူ ဒေါ်စိန့်ကို ခိုင်းလိုက်သည် ။ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေလည်း ခြံဝမှာ စုပြုံရောက်နေကြတာကို သူ တွေ့ရသည် ။ရဲတယောက်က ခြံပေါက်ဝမှာ ရပ်နေသည် ။ ခြံထဲကိုတော့ ပေး မဝင်ဘူး ။ ဗဟန်း မြို့နယ် ရဲစခန်း ရန်ကုန်မြို့ မနက်စောစော ။အရမ်းကို နုဖတ်ချောဖြူနေတဲ့ ရွေမင်းသမီးလေး ပုန်းညက်ဖြူ တယောက် ညစ်ပတ်ပေရေပြီး ခြင်တွေ ပေါတဲ့မိန်းမကြမ်း မိန်းမပျက်တွေဘဲ ရောက်ကြတာ များတဲ့ ရဲစခန်းက အချုပ်ခန်းထဲမှာ တညတာ အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ရလို့ မျက်နှာလေး ညှိုးနွမ်းနေသည်ကို ဒုရဲအုပ်ကျော်လွင်လွင်က စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အမေ ဒေါ်မိုးပပမောင်က ကျော်လွင်လွင့်ကို အကူအညီတောင်းခံ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာက သူ့သမီး နုနုထွတ်ထွတ်လေးကို “ ကြည့်ပေးပါ” တဲ့ ။
ကျော်လွင်လွင်လည်း ရဲစခန်းဘေးက လဖက်ရည်ဆိုင်က မှာပေးတဲ့ လဖက်ရည်နဲ့ နံပြားထောပတ်သုတ်ကို ပုန်းညက်ဖြူအတွက် အချုပ်ခန်းထဲကို ယူသွားပေးသည် ။ အချုပ်ခန်း ဆိုတာက မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ခွဲခြားထားပေမယ့် အချုပ်ခန်းထဲ ရောက်ကြတဲ့ မိန်းမတွေက များသောအားဖြင့် လမ်းဘေး မှောင်ရိပ်ခိုတဲ့ သူခိုးမ ခါးပိုက်နှိုက်မတို့ ပြည့်တန်ဆာတို့ ဆိုတော့ မိုက်ရိုင်းတာတွေများသည် ။ တချို့ဆိုရင် ရဲစခန်း..အချုပ်ခန်း..ထောင်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်လို့ ပြောရမလိုဘဲ ။ ခဏ ခဏ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာလေ ။ ဒီတော့ ပုန်းညက်ဖြူလေးကို လာမကျောအောင် လာ မစော်ကားအောင်ကာကွယ်ဖို့က ကျော်လွင်လွင်မှာ တာဝန်ရှိနေသည် ။ ( တာဝန်ရှိနေသည် လို့ သူ့ဖါသာ ထင်နေတာ ) ။ကျော်လွင်လွင် လည်း ည တာဝန်ကျ ရဲမေ ခင်ထူးထူးကို ပုန်းညက်ဖြူကို တစေ့တစောင်း ကြည့်ရွုစောင်မ လိုက်ဖို့ မှာထားခဲ့သည် ။ ဒီည အဖမ်းခံရလို့ အချုပ်ခန်းထဲ ရောက်နေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ အမွုနဲ့ ရွေဝတ်မွုံ ကိုလည်း ပုန်းညက်ဖြူကို စောင့်ရှောက်ဖို့ မှာထားခဲ့သည် ။ ရျွေဝတ်မွုံက လုပ်စားနေတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ ကျော်လွင်လွင် တို့နဲ့က အကျွမ်းတဝင်တောင် ဖြစ်နေပြီ ။ “ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …အကို…” ပုန်းညက်ဖြူက ကျော်လွင်လွင်ကို ပြောလိုက်သည် ။ “ ရပါတယ်…ညီမရယ်….အကို ထင်တာကတော့ ညီမ အမွုက တခုခု မှားယွင်းနေတယ်…ညီမ မကြာခင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် လို့ အကို ထင်နေတယ်…အဆင်ပြေပါစေဗျာ…..” ဒီအချိန်မှာ တာဝန်ကျ ရဲတပ်သားလေးက “ ဆရာ…ညက လူသတ်မွုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတယောက်က သတင်းပေးချင်လို့ ဆိုပြီး ရောက်နေပါတယ်….” လို့ လာပြောလို့ ကျော်လွင်လွင်လည်း ရဲစခန်းရဲ့ အရှေ့ဖက် တာဝန်မွူးရုံးဖက်ကို ပြန်လာခဲ့ရသည် ။ အသက်က ပုန်းညက်ဖြူတို့လို အရွယ်လို့ ခန့်မှန်းရသည် ။ အသားဖြူဖြူ ပိန်ညောင်ညောင် မျက်မှန်ထူထူနဲ့လူတယောက် ။အဆိုတော်ထူးအိမ်သင်နဲ့ တူသည် လို့ ကျော်လွင်လွင် ထင်ိသည် ။ “ ကျနော် ဒုရဲအုပ် ကျော်လွင်လွင်ပါ …ထိုင်ပါ..ခင်ဗျား နံမည်က….” “ ကျနော် ဘိုတောက်ကျော်ပါ..ညက ဖြစ်သွားတဲ့ လူသတ်မွုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးတကြီး သတင်းပေးချင်လို့ ပါ…” “ ဟုတ်ပြီ….ထိုင်ပါ …. ပြောပါ….” ဘိုတောက်ကျော်က “ ကျနော်က အသတ်ခံရတဲ့ ဦးအောင်ဇေဝင်းကို တို့ရဲ့ဘေးကပ်ရက် ခြံက ဦးဝေဋု ကျော်ရဲ့ သားပါ ..ကျနော်က ပုန်းညက်ဖြူနဲ့ တကျောင်းထဲပါ……ကျနော်လည်း ညကထဲက ဒီအကြောင်း လာပြောမလို့ပါ..မနေ့ညနေက ကျနော် မြင်လိုက်ရတဲ့ လူတယောက် အကြောင်း …” ကျော်လွင်လွင်လည်း အရမ်း အံ့သြ စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ “ လူတယောက်..ဟုတ်လား…….” “ ဟုတ်ပါတယ်….လူတယောက် ပုန်းညက်ဖြူတို့ ခြံထဲကို ခိုးဝင်သွားတာကို ကျနော် တွေ့လိုက်တယ်…သူ ပြန်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အခါမှာ သူ့စွပ်ကြယ်မှာ သွေးတွေ ပေကျံနေတယ်…..” “ ဟာ……” “ ကျနော့်အထင်တော့ သူက လူသတ်သမားဘဲ ………..ပုန်းညက်ဖြူ သတ်တာ မဟုတ်ဘဲ ဒီလူက ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ကို သတ်တာ ဖြစ်မယ် . . ” “ သူ့ပုံပန်းက ဘယ်လိုလဲ..အသက် ဘယ်လောက်လဲ….ခင်ဗျား…သူ့ကို မြင်ရင် မှတ်မိမလား….သေသေချာချာလေး ပြောပြနိုင်မလား…..” “ ကျနော့်မှာ သူ့ပုံ ရှိနေတယ်…..” “ ဟာ……ဘယ်လို..ဘယ်လို . . .” “ ကျနော် ဗီဒီယို ရိုက်ထားလိုက်တယ်ဗျ….” “ အို….လုပ်….လုပ်ပါအုံး..အဲဒီဟာ ဘယ်မှာလဲ……ပါလာလား……” “ ဟုတ်..ပါလာပါတယ် . . .” ကျော်လွင်လွင်လည်း ချက်ချင်းဘဲ ဘိုတောက်ကျော် တွေ့လိုက်တဲ့ ဗီဒီယို ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုန်းညက်ဖြူတို့ တိုက်ထဲကို ခိုးဝင်တဲ့လူ ဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ စုံစမ်းသည် ။
ဦးမြအောင်ဆွေ..ဒေါ်မိုးပပမောင် နဲ့ ပုန်းညက်ဖြူတို့ကို ဗီဒီယို ပြပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါ သူတို့က ဒီလူ ဘယ်သူဆိုတာကို မသိဘူး မမြင်ဖူးဘူး လို့ ပြောကြသည် ။ သို့ပေမယ့် နေရပ်ကို ပြန်သွားတဲ့ အိမ်ဖေါ်နော်ဆွိကို မေးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလူဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့သည် ။ သူဟာ နော်ဆွိရဲ့ အကို နော်လီစာရဲ့ သား ..စောအယ်စိုး …ပါ ။ နော်ဆွိနဲ့ နော်လီစာတို့ကို စောအယ်စိုး ဘယ်မှာလဲ လို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ စောအယ်စိုး က အလုပ်ခွင်မှာ ရှိနေတယ် လို့ ဖြေကြတာနဲ့ စောအယ်စိုး အလုပ်လုပ်တဲ့ တွင်ခုံကို ကျော်လွင်လွင် လိုက်သွားပြီး စောအယ်စိုးကို ရဲစခန်းကို ခေါ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းပါသည် ။ စောအယ်စိုး ဗဟန်း ရဲစခန်းက တရားခံတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ အခန်းလေး ထဲမှာ စောအယ်စိုး ရောက်နေသည် ။ ခေါက်ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်နေသည် ။ လက်ထိပ် ခတ်မထား ။သူ့အရှေ့မှာ စားပွဲတလုံး ရှိနေသည် ။ ဒီ စားပွဲရဲ့ တဖက်မှာ ကုလားထိုင်တလုံးနဲ့ ဒုရဲအုပ် ကျော်လွင်လွင် ထိုင်နေသည် ။ ဒီ အခန်းရဲ့ ကပ်ရက် အခန်းထဲမှာတော့ ပုခုံးမှာ ကြယ်ပွင့်တွေ အခက်တွေ တော်တော်များတဲ့ ရဲအရာရှိကြီးတွေဟာ မှန်ပြူတင်းပေါက်ကနေ တဖက်ခန်းက ဒုရဲအုပ် ကျော်လွင်လွင်က စောအယ်စိုးကို စစ်မေးနေတာကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရွု နားထောင်နေကြသည် ။ “ မင်း…ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ကို သတ်သလား ….စောအယ်စိုး……” “ ဟုတ်..သတ်တယ်ဗျ ….” ဒုရဲအုပ် ကျော်လွင်လွင်က စောအယ်စိုးက သူ မသတ်ဖူး လို့ ငြင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ ။ သတ်တယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်လို့ အံ့အားသင့်သွားသည် ။ “ ဘာလို့ သတ်တာလဲ…..” “ ကျနော့် ညီမနဲ့ အမေကို မုဒိန်းကျင့်လို့…..” “ မင်း က ဒီလို မုဒိန်းကျင့်တာကို ဘယ်လို သိတာလဲ…..” “ ဒီ လူယုတ်မာကြီး နဲ့ သူ့ဘော်ဒါ ရှေ့နေကျားမောင်တို့က ကျနော့်ညီမနဲ့ အမေကို အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ပြီး မုဒိန်းကျင့်တာတွေကို အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်တယ်ဗျ…..အဲ..သူတို့ ကိုယ်တိုင် တင်လိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး..သူတို့ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကို ပြင်ပေးတဲ့ အိုင်တီ သမားက တင်လိုက်တာ ….ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေက ပြလို့ ကျနော် သိရတာ..ကျနော် တအား စောက်ရှက် ကွဲသွားရပြီး အရမ်းလဲ ရှက်သွားတယ်ဗျာ….အမေနဲ့ ညီမလေး ကိုလည်း မေးကြည့်တယ်….။
ပထမ သူတို့က ငြင်းတယ်….အင်တာနက် မှာ ပါလာတယ် လို့ ပြောပြတော့မှ ဝန်ခံတယ်…ဒါကြောင့် ကျနော် သူ့ကို လာပြီး ချောင်းမြောင်းနေခဲ့ပြီး အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ ရှိမနေတဲ့အချိန် အိမ်ထဲ ဝင်ပြီး ဓါးနဲ့ ထိုး သတ်လိုက်တယ်…..” “ မင်း သူ့အိမ်ကို ရောက်တာက စပြီး ဘယ်လို သတ်သလဲ ဆိုတာတွေကို အကုန် ပြောပြပါလား….” “ ဟုတ်…ပြောပြမယ်…ဒါပြီးရင် ရှေ့နေကျားမောင် ဆိုတဲ့ လူယုတ်မာကောင်ကြီးကိုပါ ဘယ်လို သတ်တယ် ဆိုတာကို ကျနော် ပြောပြမယ်……” “ ဘာ…မင်း…မင်း..သူ့ကိုပါ သတ်လိုက်တယ်လား……” “ ဟုတ်တယ်…သူက တယောက်ထဲ နေတာ…သူ့အိမ်ကို ခင်ဗျားတို့ သွားကြည့်ရင် တွေ့လိမ့်မယ်….ကျနော် ရဲဒင်းနဲ့ ခုတ် သတ်ထားတယ်…..” စောအယ်စိုးက အဖြစ်အပျက်တွေကို အသေးစိတ် ဖြောင့်ချက်ပေး သည် ။ “ မတရားလွန်းတဲ့ ဒီ လူယုတ်မာကြီးတွေကို ဆုံးမဖို့ တခြားနည်း မရှိဘူးဗျ…ဒီလို အပြတ် ရှင်းပစ်ရတယ်…လုပ်ရဲရင် ခံရဲတယ်ဗျာ….ဒါကြောင့် ကျနော် ထွက်မပြေးခဲ့ဘဲ ခင်ဗျားတို့လာဖမ်းတာကို စောင့်နေတာ…….ခင်ဗျားတို့ သူတို့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို တွေ့ခဲ့ရင် ကျနော် ဘာကြောင့် သတ်သလဲ ဆိုတာတွေ သဘောပေါက်လိမ့်မယ်……” ပုန်းညက်ဖြူ ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ကို သတ်တဲ့လူ အစစ်အမှန် ပေါ်လာတာကြောင့် ပုန်းညက်ဖြူ တယောက် အချုပ်ကနေ ပြန် လွတ်လာသည် ။ပုန်းညက်ဖြူက ဘာကြောင့် ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ကို သတ်တယ်လို့ ပြောခဲ့သလဲ ဆိုတာကို မေးတော့ သူ့အမေ ဒေါ်မိုးပပမောင် သတ်တယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် အမေ့ကိုယ်စား ဝင်ခံဖို့ လုပ်ခဲ့တာ လို့ ပုန်းညက်ဖြူ က အားလုံးကို ပြောပြသည် ။ အမေ့အပေါ် အမြဲ နှိပ်စက် ဒုက္ခပေး…သူ့ကိုလည်း မုဒိန်းကျင့်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့..အိမ်အကူတွေ ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ် အတင်း အဓမ္မကျင့်ခဲ့တဲ့ ပထွေးကြီး ဓါးတန်းလန်းနဲ့ သေနေတာ တွေ့လိုက်တော့ အမေ သတ်သွားတာဘဲ လို့ ထင်မိခဲ့သည်…အမေ့ကို ထောင်မကျစေချင်ဘူး…..ဒါကြောင့် သူ သတ်သည်လို့ ပြောလိုက်တာ တဲ့ ။ ပုန်းညက်ဖြူနဲ့ မိုးပပမောင်တို့လည်း ဦးအောင်ဇေဝင်းကို လောလောလတ်လတ် အသတ်ခံထားရတဲ့ ဒီတိုက်ကြီးမှာ မနေချင်ကြတာကြောင့် မြအောင်ဆွေရဲ့ တိုက်ခန်းမှာ သွားနေကြသည် ။ပုန်းညက်ဖြူ ရှိနေလို့ မြအောင်ဆွေနဲ့ မိုးပပမောင်တို့သည် သူရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သာမန် မိတ်ဆွေတွေလိုဘဲ နေကြရပြီး သူ မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာဘဲ ချစ်သူတွေလို ချစ်တင်းနှီးနှော ကာမအမွုကို ပြုကြ ရသည် ။
မြအောင်ဆွေ အဖို့ အင်မတန်မှ ချောမောလှပ ဖြူဖွေးတောင့်တင်း စိုပြေနုဖတ်လွန်းတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူလေးနဲ့ တအိမ်ထဲ နီးနီးကပ်ကပ် နေနေရတာကလည်း ရင်ခုံစိတ်လွုပ်ရှားစရာ ဖြစ်လာရသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် နေ့လည်နေ့ခင်းမှာတော့ အကျ င်္ီအောက်မှာ ဘရာစီယာ ရင်စည်းခံကာ ဝတ်တတ်နေတတ်ပေမယ့် ညအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါးလွာလွာကို အတွင်းက ဘာမှ ခံမဝတ်ဘဲ တထပ်တည်း ဝတ်တတ်သည် ။ သာမန်ည တညမှာတော့ သူ့အခန်းနဲ့သူ သီးသန့်သီးခြား နေတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူနဲ့ သူ တိုးမိစရာ မရှိပေမယ့် တညမှာ သူတို့နေတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ကြီး နဲ့ မနီးမဝေးမှာ မီးလောင်သည် ။ ရပ်ကွက်က လူတွေ ပြေးလွား နေကြတာကို မြအောင်ဆွေ ပြူတင်းပေါက်ကနေ တွေ့ရသည် ။ မိုးပပမောင်က သူမ အိပ်ခန်းထဲမှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေသည် ။ ဒီအချိန်မှာ ပုန်းညက်ဖြူသည် အိပ်ရာက နိုးလာပြီး ဧည့်ခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့မြအောင်ဆွေဆီကို ရောက်လာသည် ။ “ အန်ကယ်ဆွေ..မီးလောင်နေတာ တော်တော် များလား . . .” လို့ လာမေးသည် ။မြအောင်ဆွေလည်း ပုန်းညက်ဖြူကို မီးက သိပ် မများပါဘူး..မီးသတ်ကားတွေလည်း ရောက်နေပြီ…ငြိမ်းသွားမှာပါ..လို့ ပြောပြနေတဲ့အချိန် ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်စိုင်လှလှကြီးတွေကို ညဝတ်ပါးပါးအောက်မှာ ရိုးတိုးရိပ်တိတ် တွေ့လိုက်ရလို့ ရင်တွေ တအား ခုံသွားခဲ့ရသည် ။ ပါးလွာတဲ့ ပိတ်သားကြောင့် ရင်သီးဖုလေးတွေကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လိုက်ရသည် ။ဒီအချိန်က စပြီး မြအောင်ဆွေသည် ပုန်းညက်ဖြူကို သမီးလေး တယောက် လို့ သဘောမထားနိုင်တော့ဘဲ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အလှအပတွေကို မိန်းမူး သာယာသွားရသည် လို့ ပြောရမှာပါ ။ နောက်တခါ မြအောင်ဆွေရဲ့ စိတ်တွေ သောင်းကျန်း ဖေါက်ပြန်ရပြန်တဲ့ အကြောင်း တခုလည်း ဖြစ်လာခဲ့ရသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ လက်ရှိ နေနေအိပ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းက မြအောင်ဆွေရဲ့ စာရွက်စာတန်းတွေ သိမ်းဆည်းတဲ့ အခန်း လေးတခန်းဘဲ ဖြစ်သည် ။ ပုန်းညက်ဖြူတို့ ရောက်လာပြီးတဲ့နောက် မြအောင်ဆွေလည်း ဒီအခန်းလေးထဲကို ဝင်လေ့ မရိတော့ပါဘူး ။
ဒီနေ့တော့ မြအောင်ဆွေ သည် အိမ်မှာ တယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့အချိန် ပုန်းညက်ဖြူ နေ နေတဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲကို ဝင်စရာ အကြောင်း ပေါ်လာသည် ။ စာရွက်စာတန်းတွေ ထားတဲ့ ဘီဒိုကြီးထဲက သူ့ကား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတန်း တချို့ကို လိုချင်တဲ့အတွက် ဝင်ရတာ ဖြစ်သည် ။ဘီဒိုကို ဖွင့်လိုက်ပြီး သွူုဖိုင်တွဲတွေ ထားတဲ့ နေရာကနေ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတန်းကို ယူဖို့ ရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန် အပေါ်ဆင့်မှာ အထုပ်တထုပ်ပွင့်နေတာကို တွေ့ရလို့ ဘာများလဲ ဆိုပြီး ဆွဲယူကြည့်လိုက်မိသည် ။ သူ ထားထားတဲ့ဟာ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာကိုတော့ သူသိသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ဟာဘဲ ဖြစ်လိမ့်မည် ။ သို့ပေမယ့် ဘာရယ်မဟုတ်..သူ စပ်စုလိုက်မိသည် ။ ဒီ အထုပ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ အံ့အားသင့်သွားခဲ့သည် ။ အထုပ်ထဲမှာက ရာဘာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မိန်းမတွေ စိတ်ထတဲ့အခါ ကိုယ့်ဖါသာ ဖြေဖျောက်တဲ့ ယောက်ျား လိင်တန်ဆာ အတု တချောင်း ဖြစ်နေလို့ပါ ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် ကာမစိတ် ထကြွသောင်းကျန်းတဲ့အခါ ဒီ လိင်တန်အတုနဲ့ ထိုးဆောင့်ပြီး အာသာဖြေဖျောက်သည် ဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ မြအောင်ဆွေရဲ့ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေဟာ တမဟုတ်ချင်း ထကြွသွားရပြီးပုန်းညက်ဖြူကို ကာမစပ်ယှက်ရလျှင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိမ့်မလဲ ဆိုတာကို စိတ်မှာ စဉ်းစားသွားရပြီ ။ ဒီနေ့ စနေနေ့မို့ မြအောင်ဆွေ အားနေသည် ။မိုးပပမောင်ကတော့ အလုပ်သွားရမည် ။ ဒါပေမယ့် အရင်စလို သွားစရာ မလိုဘူး ။ ပုန်းညက်ဖြူက သူ့သူငယ်ချင်း ဆွေထိုက်ဆီကို သွားလည်မည် လို့ ပြောသည် ။ မြအောင်ဆွေလည်း ပုန်းညက်ဖြူက ခုတလော အိမ်မှာတချိန်လုံး ရှိနေလို့ မိုးပပမောင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ် မတွေ့နိုင်ခဲ့လို့ တအား တွေ့ချင်လုပ်ချင်နေသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ အပြင်သွားလိုက်တာနဲ့ မိုးပပမောင်ကို အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲသွင်းပြီး သူရောကိုယ်ရော အဝတ်အစားတွေ ကဗျာကရာ ချွတ်ကြပြီး ကုတင်ပေါ်ကို လှမ်းတက်လိုက်ကြသည် ။ “ မိုးရယ်…ကိုဆွေလေ….မိုးနဲ့ တအား တွေ့ချင်နေတာ…မနည်းကြီး အောင့်အည်းထားနေရတယ်…” “ ကဲ..ခု တွေ့နေရပြီလေ…အတိုးချပြီး လုပ်တော့ ကိုဆွေ..မိုး…စုတ်ပေးမယ်နော်….” မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ မြအောင်ဆွေရဲ့ တုတ်ဖီးနေတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို တယုတယ ကိုင်ပွတ်ပေးနေရင်း ပြောလိုက်တဲ့ မိုးပပမောင်ရဲ့ လုံးတင်းကော့နေတဲ့ နို့ကြီးတွေကို မြအောင်ဆွေကလည်း အငမ်းမရ စို့လိုက်သည် ။
မိုးပပမောင်ရဲ့ ဖေါင်းအိနေတဲ့ နွုတ်ခမ်းလေးက သူ့ဒစ်လုံးကြီးကို ငုံလိုက်လို့ မြအောင်ဆွေလည်း ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် အိပ်ရင်း အစုတ်ခံလိုက်သည် ။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးနေတဲ့ မိုးပပမောင်က သူ့လဥကြီး တွေကို လည်း လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည် ။ အစုတ်ကျွမ်းလှတဲ့ မိုးပပမောင်ရဲ့ လျာလေးနဲ့ လိင်တန်ကို ကလိပေးနေတာကို မြအောင်ဆွေ တအင်းအင်းနဲ့ညည်းအော်ရင်း တအား ကျေနပ် သဘောကျနေသည် ။ လိင်တန်အရင်းအထိ ငုံပြီး ဆွဲစုတ်ပေးနေတာ ကောင်းလွန်းနေသည် ။မိုးပပမောင်ရဲ့ အစုတ်ကို သူ တမ်းတနေတာ ကြာပြီ ။ ပုန်းညက်ဖြူ ရှိနေလို့ သူ မရနိုင်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့တာ ။ လိင်တန်ရဲ့ ထိပ်က အပေါက်လေးကို လျာထိပ်ချွန်လေးနဲ့ ထိုးဆွကစားပေးနေတော့ ပြီးချင်ချင်တောင် ဖြစ်လာရသည် ။ “ တော်ပြီ..မိုး…..ရပြီ…ရပြီ…..” လို့ ပြောလိုက်တော့ မိုးပပမောင်လည်း လိင်တန်ကို စုတ်တာ ကလိတာ ရပ်လိုက်သည် ။ မြအောင်ဆွေ တအားကောင်းပြီး ပြီးချင်လာပြီ ဆိုတာကို မိုးပပမောင် သိလိုက်သည် ။ ဒီတခါ အလှည့်ကျတာက မြအောင်ဆွေပါ ။ မိုးပပမောင်ရဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူလှလှတွေကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး ခုံးမို့ဖေါင်းနေတဲ့ အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီးကို နမ်းရွုံ့ပေးလိုက်ပြီ ။ “ အို…ကိုဆွေရယ်….ဟင့်ဟင့်……”မိုးပပမောင်လည်း စောက်စိကို နှာခေါင်းချွန်ကြီးနဲ့ ထိုးကလော်ကစားနေတာကို ခံလိုက်ရလို့ တထွန့်ထွန့်နဲ့ တုန်ခါသွားရသည် ။ မြအောင်ဆွေက အကွဲကြောင်းတလျောက် သူ့နှာခေါင်းထိပ်နဲ့ လိုင်းဆွဲ ပွတ်တိုက်ပေးနေသည် ။ မိုးပပမောင်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်က အရည်တွေ တအား စိမ့်ယိုစီးထွက်လာနေသည် ။ မြအောင်ဆွေက ဒီအရည်တွေကို လျာနဲ့ သိမ်းယူလိုက်သည် ။မိုးပပမောင်သည် အင်္ဂါစပ် အရမ်းလှသည် ။ အမွေးတွေ အကုန်ပြောင်အောင် ရိပ်ထားလို့ ရှင်းလင်းပြောင်သန့်နေသည် ။ နွုတ်ခမ်းသားတွေက နီရဲလှပနေဆဲ ။
ကလေးတယောက် မွေးထားပေမယ့် ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းစီးစီးကြပ်ကြပ်နဲ့ မက်မောစရာကောင်းနေဆဲ ။ မြအောင်ဆွေလည်း မိုးပပမောင်ကို လက်ထပ်ချင်သည် ။ သို့ပေမယ့် မိုးပပမောင်က လင်ကြီး သေသွားတာတောင် မကြာသေးဘဲ နောက်လင် ထပ်ယူသည် ဆိုတာကို မလုပ်ချင်သေးဘူး..ခဏနေပါအုံး ကိုဆွေရယ်လို့ ပြောနေလို့ ။ “ကိုဆွေနဲ့ မိုးနဲ့ အခုလိုလည်း တွေ့နေလို့ ရတာဘဲလေ..တအိမ်ထဲလည်း နေနေတာဘဲ… လက်ထပ်ကြမှ မဟုတ်ပါဘူး….”လို့လည်း မိုးပပမောင်က ပြောသည် ။ သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မိုးပပမောင်ရဲ့ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို တွန်းဖြဲပြီး အင်္ဂါစပ်အကွဲကို လျာကြီးနဲ့ စပြီး ယက်သည် ။ မိုးပပမောင်လည်း မြအောင်ဆွေ ယက်ပေးတာတွေကို ကြိုက်သည် ။ မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ခံရတာက တမျိုး အရသာရှိသလို သူယက်နေတာကို ကြည့်ပြီး ခံရတာလည်း စိတ်တမျိုးကြွပြီး သဘောကျသည် ။ သူ့လျာကြီးတပြတ်ပြတ်နဲ့ ယက်ပေးနေတာကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ခံရတာလေ ။ ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်လာရင် ယောက်ျား ဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ ရွံရှာရမှန်းလည်း မသိတော့ ။ လုပ်မိလုပ်ရာကို လုပ်ကြသည် ။ အခုလည်း မြအောင်ဆွေသည် ကပ်ရက်မှာ တွေ့နေရတဲ့ မိုးပပမောင်ရဲ့ စအိုပေါက်ညိုညိုလေးကို လျာနဲ့ သွားပြီး ထိုးကလိနေသည် ။ သူ ဒီလိုမျိုး မကြာခဏ လုပ်တတ်သည်ကို မိုးပပမောင် မှတ်မိသည် ။ အင်္ဂါစပ် အယက်ခံရတာ မဆန်းပေမယ့် စအိုကို အခုလို လျာနဲ့ ထိုးဆွ ကလိခံရတာက ဆန်းနေသည် ။ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရပေမယ့် အားတော့ နာမိသည် ။သူ ယက်တာကို တော်တော်လေး ကြာအောင် ဇိမ်နဲ့ ခံနေလိုက်ပြီးတဲ့နောက် မိုးပပမောင်သည် လိင်တန်ထည့်ထိုးတာကို လိုလားလာသည် ။ မြအောင်ဆွေကို ယက်တာ ရပ်လိုက်ဖို့ ပြောလိုက်သည် ။ မြအောင်ဆွေရဲ့ လိင်တန်ကြီးလည်း တအားကို တောင်မာတင်းနေသည် ။ မိုးပပမောင်ရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားမှာ နေရာဝင်ယူလိုက်တော့ မိုးပပမောင်သည် ပေါင်တန်တွေကို ပိုပြီး ဖြဲကားလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည် ။ လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီးကို အင်္ဂါစပ်ပေါက်မှာ တေ့လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်လို့ မိုးပပမောင်ရဲ့ နွုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေ ဖတ်ကနဲ ပွင့်ဟသွားပြီး “ အို့ ” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာသည် ။ တုတ်ဖီးနေတဲ့ လိင်တန်ကြီးနဲ့ အထိုး ခံလိုက်ရလို့ ။ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသား နုနုလေးတွေကို ပွတ်လှိမ့်တိုးပွတ်ပြီး လိင်တန်ကြီးက ဝင်သွားသည် ။ အီဆိမ့်တဲ့ အရသာထူးကို မိုးပပမောင် ခံစားလိုက်ရလို့ မြအောင်ဆွေရဲ့ လက်မောင်းတွေကို လက်အစုံနဲ့ ကိုင်ဆုပ်ရင်း ဖင်ကြီးတွေ ကို ကော့ပေးလိုက်မိသည် ။မြအောင်ဆွေရဲ့ လိင်တန်ကြီး တထစ်ထစ်နဲ့ ထိုးညှောင့်နေသည် ။ “ အိုး…ကိုရယ်….အိုး…ကိုရယ်…..အား…….အမလေး……အီး…..ကောင်းတယ်…..ကောင်းတယ်…..လုပ်ပါ လုပ်ပါ…”လို့ အသံလေး ထွက်ရင်း အောက်ကနေ ကော့ပေးနေသည် ။
အရည်တွေ ပိုလိုက်လာပြီး ထိုးညှောင့်လိုက်တိုင်း တစွိစွိ တဖပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ မိုးပပမောင်ရဲ့ညည်းသံလေးက ပို ကျယ်လာသည် ။ မြအောင်ဆွေလည်း တရွူးရွူးနဲ့ ဖိဖိဆောင့်ထည့်နေသည် ။ “ မိုး..ကောင်းလားဟင်….” လို့လည်း မောဟိုက်သံကြီးနဲ့ မေးသည် ။ မိုးပပမောင်က “ ကောင်းတယ်ကို..တအား..ကောင်းတယ်…..လုပ်လုပ်….တအား…တအား….” လို့ ပြန်ပြောတဲ့အခါ မြအောင်ဆွေက “ ဘာလုပ်ရမလဲ..ပြောပြော..” လို့ မေးပြန်သည် ။ “ ဟင့်..ကိုရယ်…လိုးဖို့ ပြောနေတာပေါ့လိုး…..လိုး..ကို့လီးကြီးနဲ့ တအားလိုး….လိုးထည့်စမ်းပါ ကိုရယ်….အီး…..တအား ကြိုက်တယ်….ကြိုက်တယ်……”လို့ မိုးပပမောင် တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ကာမစည်းစိမ်ကို တဝကြီး ခံစားနေပါသည် ။ မကြာခင် အရှိန်ထပ် တင်လိုက်ကြပြီး ဒလစပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်ရင်း မိုးပပမောင်နဲ့ မြအောင်ဆွေတို့ တချိန်ထဲလို ပြိုင်တူ ပြီးသွားကြသည် ။ သုတ်ရည်တွေ တပုံတခေါင်းကြီး ပန်းထုတ်သွားရင်း မြအောင်ဆွေလည်း အထွဋ်အထိပ်ကို တက်လှမ်းသွားရသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် ဆွေထိုက် ကောင်းမွုကြောင့် မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ လိင်အသားပေး အပြာဇာတ်လမ်းတွေကို ဖတ်ခွင့်ရလိုက်သည် ။ ဆွေထိုက် ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖတ်ရသလို ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေကို ရေးတင်နေတဲ့ မြန်မာဖိုရမ် တခုကိုလည်း ဆွေထိုက် ပြပေးလို့ သိလိုက်ရသည် ။ မောင်းမကန်ကမ်းခြေက ဘန်ဂလိုကြီးပေါ်မှာ ပထွေး ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုနဲ့ အိမ်ဖေါ်မ စန်းစန်းတင့်တို့ရဲ့ ကာမစပ်ယှက်ပွဲကို တဝကြီး မြင်တွေ့ ကြည့်ရွုခဲ့ရတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူသည် ထိုအချိန်ကစပြီး ဒီလို ဖိမ ကာမစပ်ယှက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကို ထပ်ပြီး ကြည့်လိုမြင်လိုတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည် ။ တနည်းဆိုရသော် ပထွေးနဲ့ အိမ်ဖေါ်မ တို့ရဲ့ ကာမပွဲက ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ မြုပ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အပျိုဖေါ်ဝင်စ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေကို ထကြွလာအောင် နှိုးဆွပေးလိုက်သလိုပါဘဲ ။ ထိုစဉ်က စပြီး ပုန်းညက်ဖြူသည် အပြာဇာတ်ကား..အပြာဇာတ်လမ်းတွေကို ရှာဖွေဖတ်တဲ့ အကျင့်လည်း ရလာသည် ။ ဒါတွေကို ဖတ်ပြီး ကာမစိတ်တွေ ကြွလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဖါသာ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်ပြီး အာသာဖြေတဲ့ အကျင့်လည်း ရလာရသည် ။
ဆန့်ကျင်ဖက် ယောက်ျားကို အရမ်း လိုလားခဲ့ပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး နေလာခဲ့တဲ့ ပုန်းညက်ဖြူဟာသူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ စောင်မမွုကြောင့် ရာဘာ လိင်တန် အတု တချောင်းကို ရရှိခဲ့ပြီး ဒီရာဘာ အတုချောင်းနဲ့ ထိုးဆောင့် အာသာဖြေနေခဲ့တာ တော်တော်လေး ကြာခဲ့ပြီ ။ အန်ကယ်မြအောင်ဆွေရဲ့ တိုက်ခန်းကို သူတို့ သားအမိ လိုက်နေကြတဲ့ အချိန် တောက်လျောက်လည်း စိတ်တွေ ထကြွလာရင် အိပ်ရာထဲမှာ စောင်ကို ခြုံပြီး ဒီရာဘာလိင်တန်အတုနဲ့ ဖြေဖျောက်ခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ ။ ဒီနေ့ညတော့ ပုန်းညက်ဖြူသည် ညသန်းကောင်ကျော် အချိန်မှာ အိပ်မက်တွေ မက် ရေငတ်ရေဆာပြီး အိပ်နေရာက လန့်နိုးလာခဲ့သည် ။ ဆိုးဝါးတဲ့ အိပ်မက်တွေက နိုးလာသည့်တိုင် မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်မိနေဆဲ ။ ဟူး……မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အိပ်မက်မက်ရင်း ပုန်းညက်ဖြူ တအားကြောက်လန့်ပြီး ဒီလိုဘဲ လန့်နိုးလာတတ်သည် ။ နိုးလာပြီးရင် ပြန်အိပ်လို့ မရတော့ဘူး ။ကုတင်ဘေး စားပွဲပေါ်ကို လှမ်း ကြည့်လိုက်သည် ။ ရေသန့်ဘူးများ ရှိမလားလို့ ။ရေက တအားဆာနေသည် ။ မီးဖိုခန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရေခဲသေတ္တာဆီကို ထွက်ခဲ့လိုက်သည် ။ ရေသောက်ဖို့ ။ မီးဖိုခန်းကို သွားရ လမ်းမှာ အန်ကယ်ဆွေ အိပ်တဲ့အခန်းလေး ရှိသည် ။ အန်ကယ်ဆွေသည် မာမီနဲ့ ပုန်းညက်တို့ကို အိပ်ခန်းတွေ ပေးလိုက်ပြီး သူကတော့ အခန်းတံခါး မပါတဲ့ စတိုခန်းလေးမှာ ကုတင်ထည့်ပြီး အိပ်နေနေနေတာ ပုန်းညက်တို့ ပြောင်းလာကထဲကပါဘဲ ။ မကြာခင်တော့ မာမီနဲ့ ပုန်းညက် အိမ်အသစ်တလုံးကို ရွေ့ပြောင်းကြတော့မှာပါ ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် ဘာရယ် မဟုတ် အန်ကယ်ဆွေ့ကုတင် ဖက်ကို ကြည့်လိုက်မိသည် ။ “ ဟင်….အန်ကယ်ဆွေ..ပုဆိုးကြီး လည်ပင်းရောက်ပြီး တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေပါလား…..ဟယ်….မထင်ရဘူး..မထင်ခဲ့ဘူး အန်ကယ်ဆွေရဲ့ ပေါင်ကြားက ယောက်ျား တန်ဆာဒုတ်ကြီးက ဧရာမကြီး ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ အန်ကယ်ဆွေ့မှာ ဒီလို လိင်တန် တုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီး ရှိလိမ့်မယ်လို့ ပုန်းညက် ဘယ်တုံးကမှ မထင်ခဲ့မိဘူး။ပုန်းညက် ခြေလှမ်းတွေ ရပ်တန့်သွားသည် ။ သူမ မျက်လုံးတွေသည် မြအောင်ဆွေရဲ့ လိင်တန်ကြီးကိုဘဲ တအံ့တသြ စူးစိုက်ကြည့်နေမိသည် ။ ပထွေး ဦးအောင်ဇေဝင်းကို ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို စန်းစန်းတင့်နဲ့ လုပ်နေကြတုံးကထဲက မြင်ဘူးခဲ့ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးသည် ။
တရက်မှာလည်း ပထွေးဦးအောင်ဇေဝင်းကို အရက်မူးပြီး ပုဆိုးကြီး လန်ကာ အိပ်ပျော်နေတုံးကလည်း သူ့တန်ဆာကြီးကို တွေ့ခဲ့ဘူးသည် ။ ပုန်းညက်သည် ယခုတိုင်အောင် ဘယ်ယောက်ျာနဲ့မှ လိင် မဆက်ဆံဘူးသေး ။ သို့ပေမယ့် ကျောင်းနေဖက် အတန်းသား ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဖက်လှဲတကင်း နေခဲ့တဲ့အခါ သူမစိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နိုးကြွတာတွေ တအား ဖြစ်သည် ။ အင်္ဂါစပ်က အရည်တွေ တအား ယိုစီး စိုရွဲတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည် ။ အန်ကယ်ဆွေနဲ့လည်း ခဏခဏဘဲ ဖက်ပွေ့ထိတွေ့ဖူးတော့ ရင်တွေ ခုံခဲ့ဘူးသည် ။ သို့ပေမယ့် အခုလို လိင်တန်လှလှကြီး သူ့မှာ ရှိနေလိမ့်မယ် လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့မိ ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ဒီလို လိင်တန်ထွားထွား ရှည်ရှည်ကြီးကို ပါးနဲ့ အပ်ထားပြီး အမြတ်တနိုး နမ်းခဲ့ဘူးသည် ။ တကယ်တမ်း အပြင်မှာ လိင်တန်ကိုကိုင်တောင် မကိုင်ဘူး ။ တခါ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘတ်စကား အပျော်စီးဘူးသည် ။ ဘတစ်ကားပေါ်မှာ လူတယောက်က အနောက်က လိုက်ထောက်တာကို ခံရဘူးသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် သူ့ဖင်ကြားကို လိင်တန်မာမာကြီးနဲ့ လိုက်ထိုးထောက်နေတဲ့အချိန် ဒီလူရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို ကိုင်ချင်စိတ်တွေ တအား ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည် ။ သို့သော် မကိုင်ဖြစ်ခဲ့ ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ စိတ်တွေ တအား ထန်လာသည် ။ဖေါက်ပြန်တက်ကြွလာသည် ။ ပြင်းထန်တဲ့ ကာမရာဂစိတ်တွေကြောင့် ကောင်းမကောင်း မစဉ်းစားနိုင်တော့ ။ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ ကုတင်ဘေးကို ခြေဖေါ့နင်းကာ လျောက်လှမ်းသွားလိုက်ပြီး လိင်တန်ကြီးကို အနီးကပ် သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ မှိုပွင့်ကြီးလို ထိပ်ဖူးကားကားကြီးက အသဲယားစရာ ရင်ဖိုစရာကြီး ။ အပြာဇာတ်ကားတွေမှာ ဒီလို ဒစ်ဖူးကြီးတွေကို ကောင်မလေးတွေ ငုံစုတ်ပေးတာတွေကို ကြည့်ခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိနေသည် ။ စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဒီလို ထိပ်ဖူးကြီးတွေကို လျာလေးနဲ့ ယက်လိုက် ငုံစုတ်လိုက် လုပ်ခဲ့ဘူးသည် ။ အန်ကယ်ဆွေသည် တခေါခေါနဲ့ အိပ်မောကျနေသည် ။ သူ့လိင်တန်ကြီးကို ကိုင်ကြည့်ချင်စိတ်တွေကို ထိန်းလို့ မရဘူး ။ သူ မနိုးလောက်ပါဘူး လို့ ထင်ပြီး သူ့လိင်တန်ချောင်းကြီးကို အသာ ကိုင်လိုက်မိသည် ။ အန်ကယ်ဆွေ နိုးသွားပြီလား ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်မိသည် ။မနိုးပါ ။
တခေါခေါနဲ့ ဟောက်လို့တောင် နေသေးသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူလည်း အားတက်သွားပြီး လိင်တန်ကြီးကို ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်မိသည် ။ပူပူနွေးနွေးကြီး …။ ဒစ်လုံးကြီးကို အသာလေး ပွတ်ကြည့် ကိုင်ကြည့်နေမိသည် ။ စိတ်တွေက တအား ထကြွနေသည် ။ အင်္ဂါစပ်ထဲက မရိုးမရွ ဖြစ်လာသည် ။ တအား ယားလာသည် ။ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသည် ။ သူ့ဟာကြီးကိုလည်း ငုံ့စုတ်ပစ်လိုက်ချင်မိသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်မိတဲ့ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ လိင်တန် နွေးနွေးကြီးကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာပြီး ပါးစပ်ထဲ ငုံပစ်လိုက်မယ့်ဆဲဆဲ မာမီဒေါ်မိုးပပမောင်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲက ချောင်းဆိုးသံနဲ့ လွုပ်ရှားသံလေးတွေကိုကြားလိုက်ရလို့ ချက်ချင်းဘဲ ဆုပ်ထားတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို လွတ်ပစ်လိုက်ပြီး မီးဖိုခန်းဖက်ကို လျောက်သွားလိုက်သည် ။ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်ပြီး ရေဘူးတဘူးကို ထုတ်လိုက်သည် ။ ပူပြင်းလှတဲ့ ကာမအရှိန်အဟုန်ကို ငြိမ်းသတ်စေဖို့ ရေအေးအေးကို မော့သောက်လိုက်ပေမယ့် လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ကာမဆန္ဒတွေကတော့ တရှိန်ရှိန် တောက်လောင်နေဆဲပါဘဲ ။ မိမိ အိပ်ခန်းဆီကို ပြန်သွားတဲ့ အချိန်မှာ သဘောကျ တပ်မက်မိသွားရတဲ့ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ လိင်တန်ကြီးဆီကိုတချက် လှမ်း ကြည့်လိုက်မိသည် ။ အိပ်ရာထဲ ပြန်ရောက်တော့ ဒီအတန်ချောင်းလှလှကြီးကိုဘဲ မြင်ယောင်မိနေပြီး တော်တော်နဲ့ အိပ်လို့ မပျော် ။ လက်က အလိုလို ပေါင်ကြားက အရည်တွေ စိုရွဲနေတဲ့ ရွေကြုပ်ဖေါင်းဖေါင်းဆီကို ရောက်သွားရသည် ။ .ယားယံလွန်းတဲ့ ဝေဒနာကို တတ်နိုင်ရင် ချက်ချင်း ကုစားပစ်လိုက်ချင်သည် ။ ဟင်း….လူးလိုက် လှိမ့်လိုက်နဲ့ . .အန်ကယ်ဆွေရဲ့လိင်တန်ကြီးကို လိုချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ပေါင်ကြားကို ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်း အိပ်ပျော်သွားရသည် ။မြအောင်ဆွေသည် ပုန်းညက်ဖြူ သူ့လိင်တန်ကို လာပွတ်သပ် ဆော့ကစားတဲ့အချိန်မှာ သူ နိုးနေသည် ။ပုန်းညက်ဖြူ စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်ပါစေ ဆိုပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ ။ ပုန်းညက်ဖြူကိုင်နေတဲ့အချိန် သူ့အမေ မိုးပပမောင်ရဲ့ အခန်းထဲက အသံတွေကို ကြားလိုက်ရလို့ ပုန်းညက်ဖြူလည်း ထလစ်သွားသလို သူလည်း ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အနောက်ကို လိုက်သွားချင်ပေမယ့် မလိုက်ရဲ ။
မနက်ကျတော့ မိုးပပမောင်လည်း အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ချိန်းဆိုထားတာ တခုအတွက် အစောကြီး အိမ်ကနေထွက်သွားရသည် ။ မိုးပပမောင် အ်ိမ်က ထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပုန်းညက်ဖြူလည်း မြအောင်ဆွေကို တွေ့ဖို့ အိပ်ခန်းထဲက ထွက်လာသည် ။ မြအောင်ဆွေကို အပြင်က ဆိုင်တဆိုင်မှာ လိုက်ကျွေးဖို့ ပူဆာမည်လို့ ပုန်းညက်ဖြူ စဉ်းစားထားသည် ။ မြအောင်ဆွေနဲ့ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေချင်နေသည် ။မြအောင်ဆွေသည် သူ့အိပ်ရာထဲမှာ မရှိဘူး ။ “ ဟင်..အန်ကယ်ဆွေ..ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး . . ” သူ မီးဖိုခန်းထဲမှာလည်း မရှိဘူး ။ဟင်..ရေချိုးခန်းထဲက ရေသံတွေ ကြားတယ်…..။အန်ကယ်ဆွေ ရေချိုးနေပုံရတယ် ..။ပုန်းညက်ဖြူသည် ညက ကိုင်ပွတ် ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို မြင်ယောင် သတိရလိုက်သည် ။ အန်ကယ်ဆွေ ကိုယ်လုံးတီး ရေချိုးနေမှာဘဲ ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲဖျန်းကနဲ ထပြီး စိတ်တွေ ဆူပွက်လာရသည် ။ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ အောင်မြင်လှပတဲ့လိင်တန်ကြီးကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်ပြီး တွေ့ချင် မြင်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာသည် ။ စိတ်ရိုင်းတွေ သောင်းကျန်းလာတဲ့အခါ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် စဉ်းစားဆင်ခြင်တာတွေ မရှိတော့ဘူး ။ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်သည် ။ အန်ကယ်ဆွေသည် ပုန်းညက် ထင်ထားသလိုဘဲ ကိုယ်လုံးတီးကြီးနဲ့ ရှိနေသည် ။ ရေချိုးလို့ အပြီး မျက်နှာသုတ် တဘက်နဲ့ ရေသုတ်နေသည် ။သူ့ပေါင်ကြားကနေ သိသိသာသာကြီးငေါထွက်နေတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကိုလည်း အသဲယားစရာတွေ့လိုက်ရသည် ။ “ ဟင်..သမီး…ပုန်းညက်……ဘာ…ဘာ……ဘာလိုချင်လဲဟင်…..” “ အန်ကယ်ဆွေ…..သမီး..ဘာလိုချင်နေတယ် ဆိုတာကို အန်ကယ်ဆွေ မသိချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့ကွာ…”ပုန်းညက်ဖြူက မြအောင်ဆွေဆီကို တိုးကပ်သွားသည် ။ “ ညက အန်ကယ် သမီး အန်ကယ့်ဟာကို ကိုင်နေပွတ်နေတဲ့အချိန် အန်ကယ် နိုးနေတယ် ဆိုတာ သမီးသိနေတယ်….အန်ကယ့်ကို သမီး ချစ်တယ်…အန်ကယ်လည်း သမီးကို သဘောကျနေတယ် ဆိုတာ သမီးသိတယ်….” ပုန်းညက်ဖြူက တတွတ်တွတ် ပြောနေရင်း မြအောင်ဆွေကို ဖက်လိုက်သည် ။
မြအောင်ဆွေလည်း တကယ်တော့ ပုန်းညက်ဖြူကို တပ်မက် သဘောကျနေခဲ့တာပါ ။ ပုန်းညက်ဖြူ ညက သူ့လိင်တန်ကို လာကိုင်တဲ့အချိန် ဆွဲလှဲပြီး နမ်းစုတ်ကိုင်တွယ် လိုက်ချင်ပေမယ့် မိုးပပမောင်က တဖက်ခန်းမှာ ရှိနေပြီး ချောင်းဆိုးသံလည်း ကြားလိုက်ရတာမို့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ရသည် ။ အခုလည်း တတ်နိုင်သမျှ သူ့စိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ပုန်းညက်ဖြူက ရင်ချင်းအပ် အတင်းကြီး ဖက်ိသိုင်းလိုက်တဲ့အခါ ညဝတ်အကျ င်္ီပါးပါးလေးကို တထပ်ထဲ ဝတ်ထားတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ နို့လုံးတင်းတင်းအိအိကြီးတွေနဲ့ ထိကပ်ဖိကပ်မိနေတော့ သူ့စိတ်တွေက တအားကို ပြင်းထန်ဖေါက်ပြန်သွားသည် ။ “ အန်ကယ်လည်း သမီးကို ကြိုက်နေတယ် မဟုတ်လားဟင်..အန်ကယ့်အကြည့်တွေကို သမီး သိတယ်..အန်ကယ် သမီးကို ကြည့်ပြီး ပစ်မှားနေတယ် မဟုတ်လား…..အန်ကယ်..သမီးကို “ ချစ် ” ချင်နေလားဟင်….အန်ကယ် ချစ်မယ် ဆိုရင် သမီးက ကြည်ဖြူတယ်..အန်ကယ့်ကို အကုန် ပေးချင်တယ်…” ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ လက်တဖက်က သူ့ပေါင်ကြားကို ရောက်သွားလို့ မြအောင်ဆွေ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ကောင်မလေးသည် ရိုးပုံရိုးလက်နဲ့ တကယ့်ကို ကဲတဲ့ ဆတ်စလူးလေး ပါလား လို့ အံ့သြမိသွားချိန် တောင်မတ် နေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့လိင်တန်ကို ပုန်းညက်ဖြူက လက်ကလေးနဲ့ ဆုပ်ညှစ် ပွတ်သပ်နေသည် ။ “ ကြီးလိုက်တုတ်လိုက်တာ အန်ကယ်ရယ်…တကယ့်ကို အားရစရာကြီး…..ရှည်လည်း သိပ်ရှည်တာဘဲ …” ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ…..ကြောင်အအ ဖြစ်နေတဲ့ မြအောင်ဆွေကို ပုန်းညက်ဖြူက လိင်တန်ချောင်းကနေ ဆွဲကိုင်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲကနေ ခေါ်ထုတ်သွားလိုက်ပါသည် ။ သူမအခန်းဆီကို ဦးတည်နေရင်း..“ မာမီ..အခုလောက်ဆိုရင် ပဲခူးက ဆီစက်မှာ အလုပ်များနေပြီ အန်ကယ်…လာ..သမီးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ကြမယ်….” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ မြအောင်ဆွေရဲ့ လိင်တန်သည် ပိုတင်းပိုကြီးထွားလာရပြီ ။
ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ကညာနံ့လေး သင်းနေတဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲကို ရောက်သွားကြတော့ မြအောင်ဆွေကို သူမကုတင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကုတင်အောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခင်းထားတဲ့ ကော်ဇောအပေါ်မှာ ဒူးလေးထောက်လိုက်ပြီး လိင်တန်ကြီးကို ပါးလေးနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက် လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်လိုက် လုပ်နေသည် ။ “ အန်ကယ်ဆွေ..သမီးကို ချောင်းနေတယ် ဆိုတာ သမီးသိတယ်..သမီး အခန်းထဲကို သမီး မရှိတဲ့ အချိန် ဝင်ပြီးသမီးရဲ့ ရာဘာတုတ်ချောင်းကို လာကိုင်ကြည့်တာလည်း သမီး သိတာဘဲ….အန်ကယ် သမီးကို သဘောကျနေတယ် ဆိုတာ အကုန်သိတယ်…”မြအောင်ဆွေသည် ငါအိပ်မက်များ မက်နေလေသလား လို့ ထင်မိနေသည် ။ အလွန်လှပတောင့်တင်းတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးသည် သူ့လိင်တန်ကို ကျကျနန ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်နေလို့ ။ “ အန်ကယ်…သမီး စုတ်ပေးမယ်နော် . . .” ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ နွုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေ ပွင့်ဟသွားကြပြီ ။ လိင်တန်ထိပ်ကို ငုံလိုက်ပြီး ဖွဖွလေး စုတ်လိုက်တဲ့ အချိန် သူမလျာလေးကလည်း လိင်တန်ကို တတွပ်တွပ်နဲ့ ကလိပေးလိုက်လို့ သူ တအား ကောင်းသွားသည် ။ “ အင်း….” လို့ ညည်းလိုက်မိသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ က လိင်တန်ကို မက်မက်မောမောနဲ့ စုတ်နေသည် ။ စုတ်နေရင်း မြအောင်ဆွေကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ငါဟာ တယ်ကံကောင်းတဲ့ လူတယောက်ပါလား လို့ မြအောင်ဆွေ စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိသည် ။ အမေကိုလည်း စိတ်ကြိုက် လိုးရ အခု သမီးကလည်း သူ့ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ပေးနေပြီ ။လိင်တန် စုတ်ပေးတာကို သဘောတွေ့နေခိုက် ပုန်းညက်ဖြူက လိင်တန်ကို အစုတ်ရပ်လိုက်ပြီး ပါးစပ်က ချွတ်လိုက်တာကြောင့် မြအောင်ဆွေရဲ့ မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ သည် သူမကိုယ်ပေါ်က ညဝတ် ဝတ်ရုံလေးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်သည် ။အိုး…လှလိုက်တဲ့ ကိုယ်လုံး…။နို့ကြီးနှစ်လုံးက ဖွံ့ဖြိုးလိုက်တာ ။ လုံးတင်းပြီး ကော့ကော့ကြီးတွေ…။နို့သီးလေးတွေက လုံးတင်းထောင်နေသည် ။ပေါင်တန်ဖြူဖွေးဖွေးတွေကလည်း အချိုးကျလိုက်တာ..။ ဒီ ပေါင်တန်တွေရဲ့ ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးက သူတွေ့ဘူးတဲ့ စောက်ဖုတ်တွေထဲမှာ အလှဆုံးပါဘဲ မို့ဖေါင်းပြီး နွုတ်ခမ်းသားထူထူ နှစ်ချုပ်က နီညိုညိုနဲ့ ပူးကပ်နေသည် ။
ပုန်းညက်ဖြူက “ အန်ကယ်ဆွေ..သမီး အရမ်း လိုချင်နေပြီ….အန်ကယ် သမီးကို လုပ်ပေးမှ ဖြစ်တော့မယ်….” လို့ ပြောလိုက်လို့ မြအောင်ဆွေလည်း “ လုပ်ပေးမယ်..သမီး..လုပ်ပေးမယ်…..” လို့ ပြာပြာသလဲ ပြောလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် လှဲချရင်း ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကား ပေးလိုက်တဲ့ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကုန်းယက်ဖို့ ကပ်လိုက်တဲ့အခါ ပုန်းညက်ဖြူက “ အန်ကယ် မမွုတ်နဲ့တော့ပုန်းညက် ယားလှပြီ…လိုးပေးပါတော့…” လို့ ပြောလိုက်လို့ လျာကြီးထုတ်ပြီး ယက်ပေးဖို့ ပြင်နေရာက ပုန်ညက်ဖြူရဲ့ ပေါင်ကြားမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကြီးကို ပုန်းညက်ဖြူ ရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ တေ့ကပ်လိုက်သည်။ “ တကယ်တော့ ပုန်းညက်က တခါမှ ယောက်ျားနဲ့ မလိုးဖူးသေးဘူး..အန်ကယ်..အန်ကယ့်လီးက ပုန်းညက် အတွက် ပထမဆုံး ကြုံဖူးတဲ့ လီးစစ်စစ်ပါ..ပုန်းညက်က ရာဘာလီးအတုနဲ့ ဖြေဖျောက်နေခဲ့တာ..ရည်းစားလည်း မထားခဲ့ဖူးဘူး….ဒက်ဒီ ကတော့ ပုန်းညက်ကို ဆေးခပ်ပြီး တခါတုံးက လိုးဖို့ ကြိုးစားသေးတယ်….ပုန်းညက်ကို ကိုင်တာတော့ ရေရေလည်လည်ဘဲ..လိုးခါနီးမှာ ဧည့်သည်တွေရောက်လာလို့ မလိုးဖြစ်လိုက်ဘူး…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ မြအောင်ဆွေလည်း အိစက်စိုရွဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ပေါက်ထဲကို သူ့လိင်တန်ကြီးကို သွတ်သွင်းပြီ ။ ရာဘာလီးနဲ့ ကြုံဖူးထားတာကြောင့် သိပ် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မရှိလှပေမယ့် သွူလီးတန်ကြီးသည် လုံးပတ် တအား တုတ်တာမို့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ပြည့်တင်းကြပ်နေသည် ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ် လုပ်ရင်း “ သမီး..အန်ကယ်ဆွေ နို့စို့လို့ ရမလားဟင်….” လို့ အသံတုန်တုန်နဲ့ မေးလိုက်သည် ။ ပုန်းညက်ဖြူက ခစ်ကနဲ ရယ်လိုက်ပြီး..“ အန်ကယ်ရယ်..ခွင့်တောင်းနေရသေးလား..အန်ကယ်က တက်တောင် လိုးနေပြီဘဲ….သမီး တကိုယ်လုံးကို အန်ကယ့်လက်ထဲကို အပ်လိုက်ပြီ ဥစ္စာကို…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ မြအောင်ဆွေလည်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို စိတ်ကြိုက် စို့ပါတော့သည် ။
ခါးအောက်ပိုင်းကလည်း တာဝန်ကျေစွာနဲ့ ဖိဖိ လိုးထည့်ပေးနေသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူလည်း သူကြည်ဖြူတဲ့အန်ကယ်ဆွေကို ပေးလိုးလိုက်ရလို့ ကြည်နူးအားရ ဖြစ်နေသည် ။ အန်ကယ်ဆွေသည် သူတို့ သားအမိအပေါ်ကို အရမ်း ကောင်းသည် ။ အလိုလည်း တအားလိုက်ခဲ့သည် ။ အနစ်နာခံခဲ့သည် ။ သူသည် လူကောင်းတယောက် ဆိုတာကို ပုန်းညက်ဖြူ သိနေတာ ကြာပြီဘဲ ။ သူ့လီးတန်ကြီးကလည်း ပုန်းညက်ဖြူ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ အပြာကားတွေထဲကလို စံချိန်မှီတဲ့ လီးအကြီးစား ဆိုက် ။အခု ဒီလီးကြီးနဲ့ လိုးပေးတာကို သူမ ခံနေရတာကို တအား ကျေနပ်နေမိသည် ။ လီးက ကြီးလွန်းလို့ စောက်ဖုတ်ထဲ ကပ်ညပ်နေသည် ။ ဒီလို မဆန့်မပြဲ အထည့်အဆောင့် ခံနေရတာကို ပုန်းညက်ဖြူ ကြိုက်တာ။ သူမ စောက်ဖုတ် နွုတ်ခမ်းသားတွေက ထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးကြီးနဲ့အတူ လိပ်ပါသွားသလို ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း လီးကြီးနဲ့အတူ ပြန်ပါလာသည် ။ ဗျီး…ဖွပ်….ဖွပ်ဖွပ်..စွပ်စွပ် ….. ပုန်းညက်ဖြူသည် အရည် တအားထွက်တဲ့ ကောင်မလေးပါလား ။ အရည်တွေ စိုရွဲနေတော့ လိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖွပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက်နေသည် ။ ။ဆီးခုံချင်း ရိုက်ထိ ဖင်ကြားကို ဂွေးစိတွေက လွဲရိုက်နေသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူလေးရဲ့ အော်သံတွေ ထွက်လာသည် ။ “ ကောင်းလား သမီး…..အန်ကယ်လ် လိုးတာ ကောင်းလား….” “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ အန်ကယ် လိုးလိုး…တအားလိုး….ဆောင့်…ဆောင့်ပါ…..အို..ကောင်းလှချည်လား….” အရှိန်ကောင်းလာာသည် ။ ဆောင့်သူက ဆောင့် ကော့ပေးသူက ပေးနဲ့ အပေးအယူမျှနေသည် ။ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း နှစ်ယောက်လုံး ကောင်းနေသည် ။ မီးကုန်ယမ်းကုန် လိုးကြပြီ ။
“ အား…အား…အား…..လိုး….လိုး……လိုး…..ဆောင့်….ဆောင့်…….….ဖပ်ဖပ်ဖပ်….ဖပ်ဖပ်ဖပ်…….အင်း…အ…အားရှီး…ရှီး…..အိုး…….အမလေး……အား………ပြီး…ပြီးတော့မယ်……. အိုး…..အား……ဖပ်ဖပ်ဖပ်….ဖွတ်ဖွတ်..” ပုန်းညက်ဖြူ တွန့်ခါပြီး ပြီးသွားသည် ။ ကောင်းလိုက်တာ အန်ကယ်ရယ်……..အူး….….အား……..” လို့ ညည်းရင်း ပက်လက်လန် ငြိမ်ကျသွားသည် ။မြအောင်ဆွေကတော့ မပြီးသေးလို့ ဆက်လိုးနေသည် ။ “ အန်ကယ်……ပြီးရင် ပုန်းညက် ပါးစပ်ထဲကို အန်ကယ့်လရည်တွေ ပန်းထည့် လွတ်ပေး…ပုန်းညက် အဲလို ကြုံချင်လို့ …”မြအောင်ဆွေလည်း အိပ်မက်မက်နေသလိုပါဘဲ ။ အပြာကားတွေ အသေအလဲ ကြည့်ခဲ့လို့လား မသိ ..။ ပုန်းညက်ဖြူသည် အပြာကားတွေထဲကလို သူမ ပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေ လွတ်ထည့်ပေးဖို့ ပြောနေသည် ။ ဒလကြမ်း ဆက်စောင့်လိုက်တော့ သူလည်း ပြီးချင်ချင် ဖြစ်လာတာနဲ့ တအားဆောင့်ထည့်ပြီး ပြီးခါနီးဆဲဆဲလေးမှာ လိင်တန်ကို ဆွဲချွတ်ပြီး ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ မျက်နှာနားကို တိုးကပ်လိုက်ပြီး ကွင်းတိုက်ပေးလိုက် တဲ့အခါ သုတ်ရည်တွေ တအား ပန်းထွက်ကုန်သည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ က ပါးစပ်လေးဟပြီး ခံယူသည် ။ ပွင့်လင်းသွားကြတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် အိမ်ထဲမှာဘဲ တနေကုန် လိုးကြတော့သည် ။ မိုးပပမောင် ပြန်လာတဲ့ အခါမှာ ပုန်းညက်ဖြူ အိမ်မှာ မရှိဘူး ။ မအောင်ဆွေကတော့ အမွုတွေ အတွက် စာဖတ်နေသည် ။ ဥပဒေစာအုပ်တွေ တပုံကြီးနဲ့ အလုပ်များနေသည်ကို တွေ့ရသည် ။ “ ကိုဆွေ…အလုပ်များနေလား..သမီးကော….ဘယ်သွားလိုက်လဲ…..” “ ဆွေထိုက်တို့ အိမ်ကို စာအုပ် သွားငှားမယ် လို့ ပြောတာဘဲ…..” မိုးပပမောင်သည် မြအောင်ဆွေ အနားကို တိုးကပ်လာသည် ။မျက်နှာပေးက ပြုံးစိစိ နဲ့ …။
“ ကိုဆွေ…..” “ မိုး…..” “ သမီး မရှိတုံး မိုးတို့ ..ဘာလုပ်ကြရင် ကောင်းမလဲဟင်…..” မိုးပပမောင်သည် သမီး ပုန်းညက်ဖြူ အိမ်မှာ မရှိဘူးလို့ သိလိုက်ကထဲက ကိုဆွေနဲ့ ချစ်စခန်း ဖွင့်ကြဖို့ တော့ အဆင်ပြေပြီ လို့ စဉ်းစားမိပြီး တအား ဝမ်းသာသွားသည် ။ ဒါကြောင့် မြအောင်ဆွေကိုရေလာမြောင်းပေး စကား ကို နောက်သလိုလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါသည် ။ မြအောင်ဆွေမှာလည်း စောစောကတင် ပုန်းညက်ဖြူကို နှစ်ချီတောင် ကောင်းကောင်း ချစ်စခန်းဖွင့်ပေးပြီးတာမို့ စိတ်တွေ တည်ငြိမ်လျက် ရှိနေသည် ။ သို့သော် မိုးပပမောင်က လိုလိုလားလား လုပ်ချင်နေတဲ့ပုံ ပေါက်တာကြောင့် မိုးပပမောင်ကိုလည်း အနည်းဆုံး တချီ လောက်တော့ ဖြုတ်ပေးမှ ဖြစ်မည် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည် ။ “ ကိုဆွေတို့အတွက် ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့..မိုးရယ်…လာ….လိုးကြမယ်…..” လို့ မိုးပပမောင်ရဲ့ ခါးလေးကို ဖက်လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲကို အတူတူ ဝင်လိုက်ကြပါသည် ။ပုန်းညက်ဖြူသည် မာမီဒေါ်မိုးပပမောင် အိမ်မှာ မရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင် အန်ကယ်ဆွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အချစ်စခန်းဖွင့်ဖြစ်သည် ။ ဒါပေမယ့် ညပိုင်းမှာ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်သောင်းကျန်းလာတဲ့အခါတွေမှာ အန်ကယ်ဆွေကို အရမ်း တမ်းတမိပေမယ့် မာမီ ရှိနေတာကြောင့် ဘာမှ လုပ်ဖို့က မလွယ်ဘူး ။ တရက်မှာ မီးဖိုခန်းထဲက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရေအေးဘူး သွားယူရင်း စိတ်တွေက ထကြွပြင်းထန်နေတော့ အန်ကယ်ဆွေရဲ့ ကုတင်ကို ရောက်သွားမိရပြီး အန်ကယ်ဆွေရဲ့ ပေါင်ကြားက လိင်တန်ကို စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်မိရသည်။ အန်ကယ်ဆွေက သူ့နွုတ်ခမ်းပေါ် လက်ညှိုး ကန့်လန့်ဖြတ် တင်ပြီး အသံမထွက်ဖို့ သတိပေးသည် ။ ပုန်းညက်လည်း ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်ပြီး သူ့ပုဆိုးပေါ်ကနေ လိင်ချောင်းကြီးကို ကိုင်နေရာက ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး ကျကျန ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်မိသည် ။
ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေကြောင့် လိင်တန်ထိပ်ပိုင်း ဒစ်ကြီးကို ငုံလိုက်မိသည်။ ပူနွေးနွေး လိင်တန်ထိပ်ကြီးကို စုတ်ပစ်လိုက်မိသည် ။ လျာလေးနဲ့ ထိပ်ပ အပေါက်လေးကို ထိုးကလိပေးမိသည် ။ ဒီတခါ အသံထွက်မလို ဖြစ်သွားတာက အန်ကယ်ဆွေ ။ပုန်းညက် အန်ကယ်ဆွေ့ကို ပြီးအောင် မွုတ်ပေးလိုက်သည် ။ ပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရည်ပူပူတွေ တဖျတ်ဖျတ် ပန်းထွက်လာသည် ။ ပုန်းညက်လည်း အကုန်လုံးကို မြိုချပစ်လိုက်သည် ။တော်သေးသည် ။ အဲ့ညက မာမီ မထလာဘူး ။ ပုန်းညက် ဒီနေ့ ဆွေထိုက်တို့အိမ်ကို သွားသည် ။ ကားမောင်းနေတုံး လမ်းခုလတ်မှာ ဆွေထိုက်ကို လက်ကိုင်အိတ်လေးတလုံး ပေးမယ်လို့ ဂတိပေးခဲ့တာကို သတိရသည် ။ အဲ့ဒီ လက်ကိုင်အိတ်က အန်ကယ်ဆွေ့အိမ်မှာ မရှိဘူး ။ ဟိုအိမ်ကြီးမှာ ကျန်နေသည် ။ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို မယူခဲ့နိုင်ဘူး ။ပုန်းညက် အိမ်ကြီးမှာ သွားယူလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ပုန်းညက် ရောက်သွားတော့ နေမဝင်သေးဘူး ။ လူမနေတာ ကြာလို့ ခြံထဲမှာ မြက်တွေ ခြုံတွေ ထူထပ်နေသည် ..။ အိမ်ကြီးထဲမှာကတော့ ဖုံတွေ ထူနေတာ တခုပါဘဲ ။ပုန်းညက် နေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးဆီကို ရောက်သွားတော့ ဆွေထိုက်ကို ပေးဖို့ အိတ်ကို ရှာသည် ။ဒက်ဒီဦးအောင်ဇေဝင်းကို ဆုံးသွားတာကလည်း တော်တော်လေး ကြာပြီ ဆိုတော့ ပုန်းညက်တို့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်လာပြီး သူရဲခြောက်မှာလည်း မကြောက်ကြတော့ဘူး ။ သေခါစကသာ ကြောက်ကြတာ ။ ဘိုတောက်ကျော်သည် တော်တော်လေး ခံပြင်းခံစား နေသည် ။ သူ့ကို ပုန်းညက်ဖြူက မချေမငံ ဆက်ဆံလိုက်လို့ ။ တော်တော် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ကောင်မ ။သူ့ပထွေးကြီး အသတ်ခံရတဲ့ အမွုမှာ ဘိုတောက်ကျော်က ရှေ့ထွက်ပြီး သတ်သူဟာ စောအယ်စိုး ဆိုတာ တင်ပြလိုက်တာကြောင့် လူသတ်တရားခံ အစစ် ပေါ်သွားပြီး ပုန်းညက်ဖြူ တယောက် အချုပ်ထဲက ပြန်လွတ်လာရသည် ။
ဘိုတောက်ကျော်သည် ဒေါ်မိုးပပမောင်..ဦးမြအောင်ဆွေတို့နဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံရင်း ရင်းနှီး ခင်မင်လာသည် ။ ဒါကြောင့် ပုန်းညက်ဖြူကိုလည်း ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့ ကြိုးစားသည် ။ သို့ပေမယ့် ပုန်းညက်ဖြူက ရိုင်းရိုင်းပျပျ ဆက်ဆံသည် ။တော်တော့်ကို မောက်မာတဲ့ စော်ဘဲ….တောက်…။ဘိုတောက်ကျော် စိတ်နာသွားသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူက သူ့သူငယ်ချင်း ဆွေထိုက် ဆိုတဲ့ စော်ကို ဘိုတောက်ကျော် ဆိုတာ လူစင်မမှီတဲ့ ငနာကောင် လို့ ပြောသည် ဆိုတာကိုလည်း သူ ပြန်ကြားရသည် ။ သူတပါးကို နှိမ်ချပြောတတ်တဲ့ ပုန်းညက်ဖြူကို ဘိုတောက်ကျော် မုန်းတီးသွားမိသည် ။ ဘိုတောက်ကျော်သည် သူရိုက်ထားတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ဓါတ်ပုံတွေ..ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်ကြည့်နေသည် ။ ကြည့်ရင်း ကာမစိတ်တွေ ထကြွလာသည် ။ ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ ပေါင်တန် နှစ်ဖက်ကြားခလယ်က လိင်တန် ဆာတန်ကြီး ထွားမာထောင်တက်လာသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ တင်းမာလုံးထွားတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကြည့်ပြီး တအား စို့ပစ်ချင်နေသည် ။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေကို ဆွဲဖြဲကားပစ်လိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို နမ်း စုတ်ပစ်လိုက်ချင်နေသည် ။ အမှတ်မထင် ပြူတင်းပေါက်ကနေ ပုန်းညက်ဖြူတို့ခြံဖက်ကို ကြည့်လိုက်မိသည် ။သူတို့ ပြောင်းသွားကထဲက ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခြံကြီးနဲ့တိုက်ကြီးသည် ညဖက်ဆိုရင် မှောင်မဲလွန်းပြီးခြောက်ခြားစရာကြီး ။ အခုလို နေဝင်ရီတရောမှာလည်း အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဦးအောင်ဇေဝင်းကို သေတာက အစိမ်းသေမို့ သူ့ရဲ့ ၀ိညာဉ်သည် မကျွတ်ဘဲ ဒီအိမ်ကြီးမှာဘဲ ကပ်နေရှိနေလို့ အရိပ်အရောင်များ မြင်ရလေမလားလို့စိတ်မှာ ထင်မိရသည် ။ “ ဟင် . . ” အနက်ရောင် ဟွန်ဒါဖစ်ကားလေးကို တိုက်ကြီးရဲ့ ဆင်ဝင်အောက်မှာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ဒါ….ဒါ….ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ကားလေး ဘဲ…..။သူ…သူ…သူများ ….ရောက်နေသလားမသိဘူး…..။အပေါ်ထပ်က ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ အခန်းကို ကြည့်မိလိုက်သည် ။ ဟင်…မီးလင်းနေတယ်….သူ ရောက်နေတာ သေချာပြီ …. ။မှန်ပြောင်းကို ပြေးယူပြီး ကြည့်လိုက်သည် ။ဟာ…..ပုန်းညက်ဖြူ ရောက်နေသည် ။ ဖုန်းပြောနေသည် ။
ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ သွေးတွေ ဆူဝေလာသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ရင့်သီး ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ဆက်ဆံမွုတွေ..နှိမ်ချပြောဆိုတာတွေကို မြင်ယောင် ကြားယောင်လာပြီး ဒီကောင်မကို တခုခု မကောင်းတာ တုံ့ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာသည် ။ အချိန်က မှောင်စပြုနေတဲ့ အချိန် ။လူသူမနေတဲ့ တိုက်ကြီးထဲ တယောက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူကို လက်စားခြေချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘိုတောက်ကျော်သည် တဖက်ခြံကြီးထဲကို အမြန် ကူးခဲ့လိုက်သည် ။ လပေါင်းများစွာ ပစ်ထားတာမို့ ခြံထဲက မြက်တွေက တအားကို ရှည်ချင်တိုင်း ရှည်နေသည် ။ မြက်ရိုင်းတောထဲကနေ ဖြတ်ပြီး တိုက်ကြီးအနားကို တိုးကပ်လိုက်သည် ။ သူ့လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ အနက်ရောင် မျက်နှာဖုံးကို ခေါင်းမှာ စွပ်လိုက်သည် ။ သိကြရောပေါ့ကွာ..ပုန်းညက်ဖြူ သည် နေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဘူးတွေထဲက လှန်လှော ရှာဖွေ ထုတ်ယူနေသည် ။သီချင်းလေး ညည်းပြီး အိတ်ကြီးတအိတ်ထဲကို ထည့်နေသည် ။ ဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ပထွေး ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုက ဆေးခပ်ပြီး မူးဝေနေတဲ့ အချိန် စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်ခဲ့တာကို ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်သည် ။ ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာ ပထွေးသည် မိန်းမပေါင်း များစွာကို အတင်း အဓမ္မ ကြံစည်ခဲ့သည် ။ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည် ။ နောက်ဆုံး ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာဘဲ သူ ကျင့်ခဲ့တဲ့ နော်လီစာရဲ့ သား စောအယ်စိုးက ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့လို့ သူ သေခဲ့ရသည် ။ သူ သေပြီးလို့ တော်တော်ကြာမှ ဒီအိမ်ကြီးကို ရောင်းချဖို့ မာမီဒေါ်မိုးပပမောင်က အိမ်ွဲစားတွေနဲ့ စပ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ အရင် က ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေပြန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ။ ဒီခြံ ဒီတိုက်အိမ်ကြီးပေါ်မှာ သူတို့ မပြောင်းလာခင် အရင် အိမ်ရှင်တွေ လက်ထက်မှာတုံးက လူတွေ သေခဲ့သည် တဲ့ ။ ဒီ ရာဇဝင်ကို သိခဲ့တဲ့ လူတွေက ဒီတိုက်အိမ်ကြီးကို မဝယ်ရဲကြ ။ ဦးအောင်ဇေဝင်းကိုက ဒီလို အယူအဆ အစွဲတွေကို သူ မယုံကြည်ဘူး..ဈေးပေါပေါနဲ့ ရရင် ဝယ်မည် ဆိုပြီး ဝယ်ခဲ့တာ ဖြစ်သည် တဲ့ ။
အခုတော့ တကယ်ဘဲ မှန်နေသည် ။ လပ်မကောင်းတဲ့ တိုက်အိမ်ကြီး ။ ပုန်းညက်ဖြူ သည် လိုချင်တာတွေ အကုန်လုံး ရပြီမို့ အိတ်ကို ဆွဲပြီး အိပ်ခန်းဟောင်းလေးထဲက ထွက်ဖို့ ပြင်သည် ။ “ ဟိတ် နေအုံး….မင်းနဲ့ ငါ စာရင်း ရှင်းစရာ ရှိသေးတယ်……” အနက်ရောင် မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားတဲ့ လူတယောက် အခန်းဝမှာ ခြေကားရားကြီးနဲ့ ရပ်နေသည် ။ပုန်းညက်ဖြူသည် ဒီလူကို ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်လိုက်သည် ။ သူ ဘယ်သူလဲ…။ မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားပေမယ့် သူ့အရပ် နဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို သေသေချာချာ စူးစိုက် ကြည့်လိုက်သည် ။ “ နင်…ဘိုတောက်ကျော်ပါ ..ငါ သိတယ်..နင့်ကို ခွေးချီသွားတောင် ငါ မှတ်မိတယ်….ဘိုတောက်ကျော်..မျက်နှာဖုံး စွပ်မနေနဲ့…” “ တောက်…စောက်ကောင်မ..ပုန်းညက်ဖြူ…..နင်..နင်ဟာလေ…ငါ့ကို အမြဲ နှိမ်ချနေတဲ့ ကောင်မ…..နင်..နင်….သိပ် စော်ကားတယ်…” ဘိုတောက်ကျော်က ဒေါသတကြီး အော်ပြောလိုက်ရင်း ခေါင်းစွပ်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ “ ဟင်းဟင်း…ဘိုတောက်ကျော်…နင်က ငါ့ကို မကျေနပ်ဘူးပေါ့လေ……” “ အေး…မကျေနပ်ဘူး…..နင်…နင်…ငါ့စေတနာကို နားမလည်ဘူး …ငါ့ခင်မင်မွုကို ဂရုမစိုက်ဘူး……နင်…နင်…..”ဒေါသကြီးလွန်းလို့ ဘိုတောက်ကျော်သည် စကားတွေ ပါးစပ်ထဲကနေ ထွက်မလာဘဲ ထစ်အနေသည် ။ “ နင် ငါ့ကို တအား စိတ်နာနေတယ်ပေါ့လေ…..ဘိုတောက်ကျော်…..” “ အေး…ဟုတ်တယ်…တောက်…နင်…နင်..စိတ်ထား မကောင်းတဲ့ ကောင်မ…..” “ ဟားဟားဟား……ဒီတော့ နင်က ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ ဘိုတောက်ကျော်…ငါ့ကို ဘယ်လိုများ ဒါဏ်ခတ်ချင်နေလို့လဲ…….”ဘိုတောက်ကျော် ကိုယ်တိုင်က ပုန်းညက်ဖြူပေါ်မှာ မကျေနပ်ချက်တွေများပြီး တအား မုန်းတီးနေတာဘဲ ရှိသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူကို သတ်ပစ်လောက်အောင်လည်း သူ မမိုက် ။ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ပြစ်ချက်တွေကလည်း သတ်ပစ်ရလောက်အောင် မဆိုးဝါးလှ ။
အခုလို လာအော်ဟစ် ဆဲလိုက်တာဘဲ သူ လုပ်ချင်တာပါ ။ “ ငါ..ငါ.မခတ်ချင်ပါဘူး…နင်က ငါ့ကို ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတာတွေ စော်ကားတာတွေ လုပ်ခဲ့လို့ ငါ မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း..အခုလို ငါ ပြောချင်တာပါဘဲ…ကဲ ငါသွားမယ်……” “ ဟင်းဟင်းဟင်း…ဘိုတောက်ကျော်..ကြည့်လေ..နင်ဟာ…တော်တော် ကြောင်တဲ့ကောင်..ငဂေါက်…..ဂျွတ်စပွတ်…..နေအုံး…မသွားနဲ့အုံး…….” ဘိုတောက်ကျော် ဆတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည် ။ ခြေထောက်တွေကို ကားပြီး ။ သူ့ပုံစံကို ပုန်းညက်ဖြူက ကြည့်ပြီး ရယ်သည် ။ “ လာ…ဒီကို….”လက်ညှိုးလေးကို ကွေးချည် ဆန့်ချီနဲ့ ပုန်းညက်ဖြူက ခေါ်သည် ။ဘိုတောက်ကျော် ကြောင်ငေးနေသည် ။ “ လာလေ…လာဆို…..”ပုန်းညက်ဖြူက သူ့လက်ကို ဆွဲကာ ခေါ်သွားသည် ။ ဘိုတောက်ကျော် ပါသွားသည် ။ “ ထိုင်…” ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ရသည် ။ “ ဘိုတောက်ကျော်..” “ နင့်ကို ငါက စတာပါ….စိတ်မဆိုးနဲ့ဟာ..နင် ကျေနပ်အောင် ငါ တောင်းပန်မလို့….” “ အာ…ဟို….” “ ပေး..နင့်လက်….” ပုန်းညက်ဖြူကဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူမရဲ့ မို့မောက် လုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားနှစ်မွာအပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်သည် ။ “ အို…” ဘိုတောက်ကျော် မထင်ဘူး ။ မထင်တာတွေ ဖြစ်ကုန်သည် ။ “ ကိုင်လေ…နင့်ကို ငါ ပေးကိုင်တာ….နင် စိတ်မဆိုးနဲ့တော့နော်…..ကိုင်ပါဟာ…အားရပါးရ ဆုပ်ညှစ်ကိုင်လိုက်ပါ…..”ပုန်းညက်ဖြူက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ကံကြမ္မာ ဆိုတာကလည်း ထူးဆန်းသား ။ဘိုတောက်ကျော် ဒီဖက် ခြံထဲကို ကူးလာတုံးက သူ့ကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်ခဲ့တဲ့ ပုန်းညက်ဖြူ ကို ဆိုးဆိုး ၀ါးဝါး တခုခု လုပ်ဖို့ ။ လက်စားခြေမလို့ ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘာလုပ်မည် ဆိုတာ မသေချာ။ မဟုတ်တာ တခုခု လုပ်မလို့ ရည်ရွယ်တာကတော့ သေချာသည် ။ ဒါကြောင့် မျက်နှာဖုံး အနက်ကြီး စွပ်လာတာ ။အခုတော့ သူ ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာဘူး ။ ပုန်းညက်ဖြူသည် သူ့ကို “ပြောဆိုခဲ့တာတွေက စတာသာ ဖြစ်တယ် ” လို့ ပြောနေခဲ့ပြီး သူ့ကို စိတ်ပြေစေချင်လို့ သူ့လက်တွေကို ဆွဲယူပြီး လုံးအိနေတဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို ကိုင်ညှစ်ကစား ခိုင်းနေသည် ။
လူမနေတော့တဲ့ တိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ် အခန်းလေးထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ဘိုတောက်ကျော်ဟာ အင်မတန်မှ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ ဖြိုးမို့တဲ့ အိစက်တဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ဆုပ်နယ်ကစားခွင့်ရနေတာက သူ့အတွက် အိပ်မက်တခု မက်နေသလိုဘဲ ခံစားနေရသည် ။ ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်ထားတာကြီး ။ ပုန်းညက်ဖြူက သူ့ကို ပစ်ပစ်ခါခါ စကားတွေဘဲ ပြောခဲ့တာ မဟုတ်လား ။ အခုတော့ သူ့ကို ရင်သားကြီးတွေကိုတောင် ကိုင်ဆုပ် ကစားခိုင်းနေသည် ။ သူကလည်း ဘယ်ညင်းလိမ့်မလဲ ။ အားရပါးရ ဆုပ်နယ်ပစ်တာပေါ့ ။ဒါကြောင့်လည်း လူကြီးသူမတွေက ပြောခဲ့ကြတာပေါ့ ။ မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်ဟာ အခုတမျိုး တော်ကြာ တမျိုး ။ အမြဲလို ပြောင်းလဲတတ်ကြသည် တဲ့ ။ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးပျံကြီးက သူ ဝတ်ထားတဲ့ မျှော့ကြိုးတပ် အားကစားဘောင်းဘီပျော့ထဲက မတ်မတ်ထောင်သွားသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူက ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ လက်တွေကို ရင်စိုင်နှစ်လုံး အပေါ်ကနေ ပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီး သူမရဲ့ တင်ပါးကားကားကြီးတွေ အပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်ပြန်သည် ။ဟာ..ပွပြီးရင်း ပွရင်း ပါလား…။ဖင်တုံးအိအိကြီးတွေကို သူ ကိုင်ခွင့်ရပြန်ပြီ ။သူ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးတွေ ရနေတယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ယုံကြမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင် သူ ပုန်းညက်ဖြူကို ဒီနေရာမှာ ချစ်စခန်းဖွင့်ခွင့်များ ရလိုက်မလား ဆိုတဲ့ အတွေးက ခေါင်းထဲ ဝင်လာသည် ။ ဒါကတော့ ဘိုတောက်ကျော်မှ မဟုတ်ဘူး ။ ဘယ်ယောက်ျား ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အတွေးမျိုး ဝင်ကြမှာပါဘဲ ။ ဆိတ်ကွယ်ရာ နေရာမှာ မိန်းမတယောက်က သူမရဲက ရင်သားတွေနဲ့ တင်ပါးတွေကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်တွယ်ခိုင်းနေပြီ ဆိုမှတော့ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ဘဲ ရှိတော့တယ် လို့ထင်ကြမှာဘဲလေ ။ ဘိုတောက်ကျော်က ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်ဆုပ်နေရင်းက တဆင့်တက်ဖို့ သူ့ဘောင်းဘီကို ဖျတ်ကနဲ အောက်ကို ဆွဲချ ချွတ်လိုက်သည် ။
အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်မထားတာကြောင့် ချွတ်လိုက်တာနဲ့ သူ့လိင်တန်ချောင်းကြီးက ဘွားကနဲ ပေါ်လာသည် ။ ဟင်….ဘိုတောက်ကျော်….ဟယ်….. ပုန်းညက်ဖြူ……လိုးကြရအောင်ဟာ….ငါ တအား ထန်နေပြီ……ဘိုတောက်ကျော်..နင့်ကို စိတ်ကြိုက် ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီလေ..နင့်ကို စော်ကားခဲ့လို့ နင် ငါ့ကို စိတ်နာနေတယ် ဆိုလို့…..နင့်ကို အလိုလိုက်ခဲ့တယ်ဟာ…တော်တော့ဟာ..ဒီမှာတင် နင့်လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်ပစ်လိုက်ပါတော့…..ဘိုတောက်ကျော်သည် ဒီလို အထားမျိုး လာခင်းတာကိုတော့ လက်မခံနိုင်….လာဆွပြီး တအား ထန် လီးအပြတ် တောင်နေပြီး နွားသိုးကြိုးပြတ် ဖြစ်ခါမှ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီစော်လေးကို ဘိုတောက်ကျော် လက်လွတ် မခံနိုင်တော့ ။ဘိုတောက်ကျော် ကြမ်းပြီ ။ပုန်းညက်ဖြူကို ကုတင်ကြီးပေါ်ကို တွန်းလှဲပစ်လိုက်သည် ။ “ ဘိုတောက်ကျော်…မလုပ်ပါနဲ့…ငါ့ကို ဒီလို အကြမ်းမကိုင်နဲ့..ငါ မကြိုက်ဘူး…” “ နင် မူမနေနဲ့ ပုန်းညက်ဖြူ..နင်ဘဲ ခံချင်လို့ နို့တွေ နယ်ခိုင်း ဖင်တွေ ကိုင်ခိုင်း လုပ်ပြီး အခု ငါ တအားထန်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ လာတားမနေနဲ့..မရတော့ဘူး…..လွန်ကုန်ပြီ…..ငါ့ အရိုင်းစိတ်တွေက ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး…” “ လွတ်…ငါ့ကို လွတ်..ဘိုတောက်ကျော်….နင် မမိုက်ရိုင်းနဲ့…..” ဘိုတောက်ကျော်က ပုန်းညက်ဖြူရဲ့ စကပ်ကို ဆွဲလှန်သည် ။ ပုန်းညက်ဖြူက ခြေထောက်နဲ့ ကန်ထည့်လိုက်သည် ။ ဘိုတောက်ကျော်ရဲ့ မျက်နှာတည့်တည့်ကို ကန်မိသွားသည် ။ ပုန်းညက်ဖြူ ကန်ချက်နဲ့ ဘိုတောက်ကျော် တယောက် ကုတင် အနောက်ကို လန်ကျသွားတဲ့အချိန် ပုန်းညက်ဖြူက ကုတင်ပေါ် ကျနေတဲ့ သူမ ဖုန်းလေးနဲ့ အရေးပေါ် နံပါတ် သုံးလုံးကို နှိပ်လိုက်သည် ။ “ ကယ်ကြပါ..ကျမနံမည် ပုန်းညက်ဖြူ ပါ ..ကျမ ကို ကယ်ပါရှင်……ကျမကို မုဒိန်းကျင့်နေပါတယ် . . .” ဘိုတောက်ကျော်သည် ကုတင်ကြားထဲက ကြမ်းပြင်ကနေ လူးလဲ ထလာသည် ။ “ ဟိတ်..စောက်ကောင်မ …စောက်ကျင့် မယုတ်နဲ့….” ပုန်းညက်ဖြူက “ နင် ငါ့အနားကို ကပ်မလာနဲ့ ..ကယ်ကြပါရှင်..ကျမကို အတင်း အလိုမတူဘဲ ကျင့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်…….. ပြီးးး။